တစ်သက်လုံးအတွဲချောင်းရတော့မလား – Grab Love Story
ကဲ့ဗျာ တော့ပစ်လေးအသစ်ဖွင့်လိုက်ပါပီ………….လူစိတ်ဝင်စားမှုမရှိရင် ပြန်လည်ဖျက်သိမ်းသွားပါမယ်…………… ကျတော်ဖွင့်တဲ့တော့ပစ်ကျတော်ပဲစပါမယ်…….ကျွန်တော်ချောင်းဖူးတဲ့ အတွေ့အကြုံကတော့ ဒီလိုပါဗျာ……….. ပထဦးဆုံးလိင်ဆက်ဆံတာကိုတွေ့ဖူးချင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်………… ကျတော် အသက် ၉ နှစ်၁၀နှစ်လောက်ကပေါ့ဗျာ…………ကျတော်ဖြင့်လေးတန်းလားပဲမသိဘူးရှိသေးတယ်………… ဖြစ်ချင်တော့ ဦးလေးကဆော်လေးတစ်ပွေတွေ့တယ်ဗျာ သူကကြိုက်တာပေါ့………ရှမ်းမလေး………….
ဒါနဲ့ သူတို့ တွေလက်ထက်ဖို့တွေ ဘာတွေနေ့တွေ ရွေးကြပေါ့……………..ဖြစ်ချင်တော့ လက်ထပ်ဖို့ ၁ ပတ်လောက်အလိုထင်တယ်ဗျာ……… အဲ့ဒီရှမ်းမလေး ကညနေဖက်ဆို အိမ်ကို လာလာလည်တယ်ဗျာ ………အဲ့ဒီအချိန် က ကျတော်ရဲ့ အဖေအမေ တွေက အလုပ် သွားတဲ့အချိန် ….. ညဖက် ၉ နာရီလောက်မှာ ပြန်လာကျတာ …..ကျတော်ရယ် ကျတော်ဦးလေးရယ်ပဲ ရှိတာ…အိမ်မှာ…..အစကတော့ ကျတော်လည်းမသိဘူးပေါ့ ဦးလေးက ဆော့ဦးနော် ဆိုပြီး အခန်းတခါးပိတ်ကာ အထဲကိုဝင်ဝင်သွားတယ်ဗျာ
ကျတော်အိမ်က အခန်းသုံးခန်းပါတယ် ဗျာ တစ်ရက်နှစ်ရက်တော့ ကျတော်လည်းမသိဘူးပေါ့ဗျာ………..သုံးရက်မြောက် နေ့ကျတော့ ကျတော်သိချင်လာတယ်ဗျာ သူတို့ဘာသွားလုပ်ကျတာလဲပေါ့ ဒါနဲ့ သူတို့ဝင်လည်းသွားရော ကျတော်လည်းဘယ်ရမလဲ အိမ်က သစ်သားအိမ်လေဗျာ ဆက်ထားတဲ့သစ်သား တွေက နှစ်ကြာလာတော့ နဲနဲဟလာတာပေါ့ ကျတော်လည်းအဲ့ဒီဟနေတဲ့ နေရာက နေ ထုတ်သေးသေးလေးနဲ့ ထိုးပြီး ဂျီးလေးတွေကို ရှင်းလိုက်တော့ မ်က္စိတစ္လုံး ချောင်းဖို့ရန်နေရာလေးထွက်ပေါလာတာပေါ့ဗျာ……….
အဲ့ဒီမှာ ဝိမ်းရားထိုးလေးမှောက်ပြီး အားရပါးရ မျက်စိလေးနဲ့ကပ်ကာစတင်ချောင်းကြည့်တော့တာပဲဗျာ ……..ဒန်ဒန့်ဒန်……….ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့ ဦးလေးက အရင်လျှောက်သွားတယ် ကုတင် ရှိရာကို ရှမ်းမလေးကတော့ နောက္က အဲ့ အရင္ဆုံးသူက အတွင်းခံ ပင်တီ ကိုချွတ်လိုက်တယ် ဗျာ အညိုရောင်လေးမှတ်မိသေးတယ်………ထမီကိုတော့မချွတ်ဘူး…..ပင်တီကုချွိတ်ပြီး .ကြမ်းပြင်မှာပဲချထားလိုက်တာ နောက်ပြီး ကုတင်ပေါတက်တယ်ဗျာ……..နမ်းတာတွေဘာတွေညာတွေမလုပ်ဖူး ဗျာ ဒါတိုက်ပဲ ကုတင်ပေါ်မှာ ပလက်လန်ပြီး အိပ်လိုက်တယ် ……..
အဲ့ဒါနဲ့ ဦးလေး ကထမိန်လေးကို အပေါ်ကိုမတင်လိုက်တော့ ရာ…….အဖုတ်လေး ပေါ်လာတယ်ဗျာ အမွေးတွေက သိပ်မများဘူး မနည်းမများပေါ့ဗျာ …….ဖြူတော့ဖြူတယ် အဖုတ်လေးက ……… ဥိးလေးကတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာ တစ်ကိုယ်လုံး ချွတ်ပြီးတော့ ဒုတ်ကြီး နဲ့ စတင်ထိုးသွင်းတယ်ဗျာ……….အစ ကတော့ နည်းနည်း သွင်းတာ ဖြေးဖြေးပဲနောက်ပြီး ခဏလည်းကြာရော စတင်ဆောင့်တော့တာပဲ အဲ့တုန်းကတော့ဘယ်သိမလဲ ဗျာ အဲ့ဒါ ကိုလှေထိုးကြီး လုပ်နည်းလို့………
အောက်ကရှမ်းမလေး ကတော့ မျက်လုံးလေး မှေးစင်းပြီးပေါင်လေးတောင်ကားပေးကာ ဦးလေးကို ပြန်တောင်လက်နဲခါးကိုဖက်ထားလိုက်သေးတယ်ဗျ……… အဲ့ဒီအချိန်မှာသတိထားမိတာတစ်ခု ကဦးလေးက ရှမ်းမလေးရဲ့ အကျီကို မချွတ်ဖူးဗျ…….ဒီအတိုင်းပဲ ပင့်တင်ထား တယ် ဘော်လီအဖြူရောင် လေးကိုမြင်နေရတယ်……… နို့လေးတွေက သိမ်မကြီး ပါဘူး …….. ၃၄ လောက်ပေါ့အလွန်ဆုံးရှိ……ဒီအတိုင်းပဲဗျာ ဦးလေးက အပေါ်ကနေပဲ ဟိုလိုလုပ်လိုက်ဒီလိုလုပ်လိုက်နဲ့ ပလွတ်ပလွတ်နဲ့အသံလေးတွေတောင်ကြားရတယ် တဟင်းဟင်းနဲ့ ညည်းသံလေးတွေလည်း အကြယ်ကြီးမဟုတ်ပေမယ့် ကြားရတယ်ဗျ…..
တိုးတိုးပေါ့………..ဒါနဲ့အဲ့ဒလို လုပ်နေရင် မိနစ်၂၀ လောက်ကြာမယ် ထင်တယ်ကျတော်စိတ်အထင် ကျတော်နာရီမပတ်ထားတော့ ဘယ်မှတ်မိမလဲဗျာ……….ဆောင့်ချက်တွေက မြန်လာကာ သစ်သားကုတင်တောင် တဒုံးဒုံးနဲ့ မြည်တယ်ဗျာ ……….. အော် အခုမှာပဲဘာလိုတဒုံးဒုံးမြည်လဲဆိုတာ သိတော့ တယ် အရင်နေ့တွေက ဦးလေးနဲ့ အဲ့ဒီရှမ်းမ နဲက အထင်ဝင်ပြီးကုတင်ပြင်နေတယ် မှတ်တာ ဘယ်သိဦးမလဲဗျာ ငယ်သေးတာကိုး……….. တဒုံးဒုံးနဲ့မည်ပြီး သိမ်မကြာခင်မှာဦးလေးက ဆောင့်တာ ရပ်သွားဆတ်ကနဲဆတ်ကနဲ ဖြစ်သွား ကာ အဲ့ဒီရှမ်းမလေးအပေါ မှောက်ယှက်ကြိးကျသွားတာကို မြင်လိုက်ရတယ်
အဲ့လိုဦးလေးဆတ်ကနဲဆတ်ကနဲဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ အောက်က တစ်ယောက်ကလည်း ကားထားတဲ့ခြေထောက်နှစ်ဖက် က ဦးလေး ကိုခွလိုက်ပြီး လက်ကလည်း ကျောကုန်းကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဖက်ထားကို တွေ့ရပါတယ်………..ဒါနဲ့သူတို့နှစ်ယောက် ၅ မိနစ်လောက်အဲ့လိုကြီးနေနေသေးတယ် ဗျ နောက်ပြီးမှထလာကာ ရှမ်းမလေးကတော့ အကျီ ပြုတ်နေတဲ့ကြယ်သီးတွေဘာတွေတပ် ……..ဆွဲဆန့် အကျီကို ထမိကိုလည်း သေချာဆန်အောင်လုပ်နေသေးတယ် ဒါပေမယ့် ဘယ်တော့အရမ်းဆန့်တော့မလဲ………..
ဦးလေးလည်းအကျီတွေပုဆိုးတွေဝတ်ပြီး တခါးဖက်ကိုလျှောက်လာတော့ ကျတော်လည်း အိမ်ရှေ့ကိုအသာလေးပြေးသွားကာ အရုပ်တွေ့နဲ့ဆော့ နေရင်း………. ဘာမှမသိသလိုပဲနေနေလိုက်တယ်……..စိတ်ထဲမှာတော့ တထိတ်ထိတ်နဲ့ပေါ့ သူတို့များသိသွားသလားဆိုပြီး………..ဒါပေမယ့်သူတို့မသိဘူးဗျ ကျတော်ကိုတောင်အဲ့ရှမ်းမလေးက နှုတ်ဆက်ပြီး ပြန်သွားလိုက်သေးတယ် ……….ဒါနဲ့တစ်ပတ်လောက်ကြာတော့ သူတို့မင်္ဂလာဆောင်ဖြစ်ကြပါလေရော………….နောက်တစ်နှစ်လောက်ကြာတော့ကျတော် ညီတစ်ဝမ်းကွဲ မွေးချလာပါလေရော…….
အဟီး ဒီကောင်မျက်နှာမြင်ရတော့ ဟိုချောင်းတဲ့ ဥစာ ကို သတိရလာတယ်ဗျ………အဲ့ဒီအကျိုးရလဒ် ကဒီကောင်လေးပဲနေမှာဆိုပြီးးးးးးးးးးးးးးးးအဟီးးးးးးးးး ……………ကဲ့ဒါကတော့ ကျတော်ငယ်ငယ်ကချောင်းဖူးတာပါဗျာ ပထမဥိးဆုံး ချောင်းဖူးချင်းပါ………….တစ်ကယ်အဖြစ်ပျက်ပါ ……….တစ်စက်မှရွီးလုံးမပါပါ………. နောက်ပိုင်းချောင်းဖူးချင်းကိုတော့ တော့ပစ်စည်လာရင်ထပ်တင်ပါမယ်…… xxxxx မီးသွေးချောင်းဘူုး ပါသည်.. မီးသွေးချောင်းတာမှ ထမင်းမစား ဟင်းမစား ချောင်းတာပါ .. အသက်အားဖြင့် ၁၄နှစ်ခန့် ရတန်းထင်ပါသည်..
ဟင်္သာတတွင် ဖြစ်ပါသည်.. မီးသွေးအိမ်တွင် ငယ်စဥထဲက စောင့်ရှောက်ပြုစုသော အမ ကို ပြန်ချောင်းတာပါ.. အမက ၂၅နှစ်ခန့်ပါ.. ကျွန်တော်က အပေါ်ထပ် ထပ်ခိုးတွင် အမ ရေချိုးခန်း ဝင်သည်ကို အပေါ်ထပ်မှ ငုံချောင်းသလို.. အမ အဖုတ် ပေါ်မည်ထင်သော နေရာ ပျဉ်ချပ်အား လည်း လွန်ဖောက်ကာ ပီကေ အုပ်ပီး လဲ ကပ် ချောင်းခဲ့ပါသည်… တစ်ခါ က ပြောဘူးသည်.. ဖတ်ဘူးသူများသိပါလိမ့်မည်.. အမ အဖုတ် ကြည့် ကောင်းတာ အားပါရင်းချောင်းခဲ့ရသော နေ့တွေမှာ တစ်ရက် အမ ထင်ပီး ရေချိုးခန်းဝင်တာ ချောင်းလိုက်တာ အက ဖြစ်နေလို့ဆိုတာပါ..
သား ၃ ယောက် မွေးသော အဘ ဒုတ် တိုတိုလေး ကြည့်ပြီး အွန်လို့ အူတူတူနဲ့ အမ အဖုတ်မမြင်ရလို့ စိတ်ညစ် ပြန်လှည့်ခဲ့ဘူးသည် ဆိုတဲ့ အကြောင်း… ခုနောက်တစ်ခုက အိမ်နားချင်းကပ်လျပ် အိမ်က အိမ်ထောင်သည် အမ နဲ့ သူ့ ညီမ ဝမ်းကွဲ ၂ ယောက် ရေချိုးတာက မီးသွေး အိပ်ခန်းဘေး .. အမ အဖုတ် မမြင်ရလို့ စိတ်ညစ်ချိန် ဒင်းတို့က ရေချိုးရင်း ဆပ်ပြာမြုပ်ထအောင် ဇောင်းတိုက်ပွတ်ဆေး ရေချိုးတာ မြင်တော့.. ယေးးးးးးးးးးးးးး ပေါ့လေ.. အဲသလိုနဲ့ ကောက်ကြောင်း ပန်းချီတွေဆွဲ .. မာစတာ ဘိတ်ခဲ့ ဘူးကြောင်း ကောင်လေးတွေ မှတ်ထား..
ငယ်ငယ် ထဲက မာစတာဘတ်တတ်ရင် .. အရေမထွက်လဲ.. ကြီးလာရင် ရှည်လာတယ် ဆိုတဲ့အကြောင်း .. xxxxx နောက်တစ်ခုထပ်ချောင်း ရတာကတော့ ပြောပြရမှာပေါ့ သူကတော့ နေ့တိုင်းနီးပါးကိုချောင်းဖြစ်တဲ့ ပုံလိုပါပဲ…………. ကျတော် ၇ တန်းလောက်ရောက်လာတော့ ကျောင်းမှာသူငယ်ချင်းတွေ့ရဲ့ သင်ကြားပို့ချချက်တွေကြောင့် ဂွင်းတော့တိုက်တတ်လာပြီပေါ့ဗျာ၊ တစ်နေ့ကျတော့ဖြစ်ချင်တော့ ကျတော်တို့အိမ်မှာအိပ်သာ အသစ်ဆောက်တယ်ဗျ၊ ရေလောင်းအိပ်သာ နှစ်ခန်းတွဲ၊
အဲ့မှာဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ မြင်သာအောင်ပြေရရင် ကျတော်တိုကအဖေကဝန်ထမ်းဆိုတော့ အိမ်ယာ မျာနေတာပေါ့ဗျာ၊ ဝန်းကြီး အထဲမျာ တစ်ချားရာထူးအဆင့်ဆင့်လိုက် သူတွေကလည်းအိပ်ရာလေးတွေရှိတာပေါ့ဖြစ်ချင်တော့ ရေတွင်းက တစ်တွင်းပဲရှိတယ်၊ အဲ့ဒါကိုမော်တာနဲ့စုပ်ပြီး တိုင်ကီတွေကို ထည့်တယ်၊ ဖြစ်ချင်တော့တစ်ရက်ကျတော့အိပ်သာတက်တာပေါ့အိပ်သာကအသစ်လေအဟဲ ဒါနဲကအသံပလံတွေကြားတော့ တံခါးကိုကြည့်လိုက်တော့ လားလား တံခါးမှာအလင်းရောင်လေးသေးသေးလေးဝင်နေတယ်ဗျ၊
အဲ့ဒါလေးကိုမျက်စိလေးကပ်ပြီးကြည့်လိုက်တော့၊ ဘယ်ဟုတ်မလဲ နပ်စ်စမလေးတွေရေချိုးနေတာဗျ၊ ဖြစ်ချင်တော့တိုင်ကီတွေက အများကြီးချထားတယ်လေ ကံကောင်းချင်တော့ တိုင်ကီတွေက သုံးဖက်သုံးတန်ကာထားပြီး ဒီအိပ်သာဖက်ကြတော့ အိပ်သာရှီနေတော့မကာထားဘူးဗျ၊ လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရှင်းရှင်းကြီးပေါ့၊ ဒါနဲ့ကျတော်လည်းဘယ်ရမလဲအပြီအပြင်ကပ်ပြီးချောင်းကြည့်တော့ ဒူးလေးတွေထောက်ပြီး ရေခပ်ခပ်ချိုးနေကျတာဗျ..၊ အကာအကွယ်လည်းရှိတယ်ဆိုတော့ ဆပ်ပြာတိုက်ဘာတိုက် သေချာလုပ်ကြတာဗျာ
အဲ့မှာစမွငျရတာပဲ နို့လေးတှကေို ခြောငျးရငျလကျကတော့ထုရငျးဗြ တယျအရာသာရှိသကိုး…..အသီးလေးတှဆေိုရခြေိုးတဲ့အခြိနျဆို တဈခါတဈလလေဈကနဲလဈကနဲ့မွငျရတယျ ဗြ ဘယျရမလဲအဲ့အခြိနျကငယျရှယျတကျကွှတုနျးဆိုတော့၊ ထှကျတာမှဖြောငျးကနဲဖြောငျးကနဲဗြာ၊ နောကျဆိုသူတို့ရခြေိုးတဲ့အခြိနျဆို အိပျသာတကျတော့တာပဲ တဈကယျတော့ဘယျတကျမလဲခြောငျးတာလေ မမွငျဖူးတဲ့နပျစမနို့မရှိဘူးလို့တောငျ ပွောရမလိုပဲ….အရှယျဆုံဗြာ အသေးအကွီးအလတျ…အဟီး အခြောငျးရငျထုရငျး ခုမြားတော့လညျး ……
လွမ်းမောစရာလိုလိုဘာလိုလိုပါပဲ xxxxx ချောင်းကြည့်တတ်တာကတော့ ရန်ကုန်ကနေ အပေအတေဘဝ စုတေပြီး ပုသိမ်ရောက်သွားတော့မှဗျ။ ကျွန်တော်တို့ ပုသိမ်မှာက ကန်သုံးဆင့်ဆိုတာ အားကြီးချောင်းလို့ကောင်း …. အတွဲတွေကလည်း သဘောကောင်းတဲ့အခါရှိသလို တစ်ခါတစ်လေ ခဲနဲ့လိုက်ထုလို့ ထွက်ပြေးရပေါင်းလည်း မနည်းဘူး။ခုနစ်တန်းနှစ်မှာ စပြီး ပုသိမ်ရောက်သွားတယ်။ ရှစ်တန်းနှစ်ကျတော့မှ သူငယ်ချင်းတွေဆွယ်တာနဲ့ အတွဲချောင်းခြင်းပညာကို စပြီး သင်ယူရတယ်။
ချောင်းနေတုန်း ပုရွက်ဆိတ်အကိုက်ခံရတာ၊ ရှေ့တိုးရင်း ခွေးချီးပုံ လက်ထောက်မိတာ၊ သစ်ပင်ပေါ်က ပြုတ်ကျလို့ သူငယ်ချင်းက ကုန်းပိုးပြန်ရတာ အစရှိသော ဖန်တန်တန် အတွေ့အကြုံတွေလည်း ပါခဲ့တယ်။ဒါပေမယ့် ချောင်းကြည့်လို့ အောင်မြင်ခဲ့တာကတော့ အဲဒီလို အောက္ဒိုးမဟုတ္ဘူးဗ်၊ အင္ဒိုး။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်အိမ်မှာပဲ။ သူ့အစ်မက အနေအထိုင်နည်းနည်းလျော့ရဲတယ်ပေါ့။ ကျွန်တော်တို့လည်း သွားရင်းလာရင်း ပေါ်သမျှ ဟိုက်သမျှ ကြည့်ကြတယ်။ တစ်နေ့တော့ သူငယ်ချင်းတို့တစ်အိမ်လုံး အပြင်သွားကြတယ်၊
သူ့အစ်မတစ်ယောက်ပဲ ကျန်ခဲ့တယ်။ အဲဒါကို ကျွန်တော် မသိဘူး၊ အိမ်သွားလည်တော့ တံခါးတွေကလည်း အကုန်ပိတ်ထားတယ်။ လှည့်ပတ်ကြည့်တော့ ခေါင်းရင်းတစ်ပေါက်ပဲ ဖွင့်ထားတာဆိုတော့ အုတ်ဖိနပ်ပေါ် တက်နင်းပြီး ကြည့်လိုက်တော့ သူ့အစ်မကို သွားမြင်တော့တာပါပဲ။ အိမ်က တံခါးတွေကို ပိတ်ထားပြီး အဲဒီခေါင်းရင်းပြတင်းပေါက်အောက်မှာ ဒရင်းမ်ဘက်ပေါ် ဖြဲကားထိုင်ရင်း ညီမလေးနဲ့ ကြည်နူးနေတာကိုး ခင်ဗျ။ ကျွန်တော်လည်း ချောင်းကောင်းကောင်းနဲ့ အဲ …. ခုမှ စစချင်း ဒါမျိုးမြင်ဖူးတာလည်း ပါတာပေါ့ …
ခြေညောင်းခံပြီးကို ချောင်းတာ။ သူက အိမ်နေရင်း ပင်တီအနွမ်းလေးတစ်ထည်ပဲ ဝတ်ထားတယ်။ အပေါ်ကလည်း အင်္ကျီက လန်တက်နေတယ်။ နို့တွေကတော့ သိပ္မကြီးပါဘူး … လက်တစ်အုပ်စာလောက်ရှိမယ်လို့တော့ အဲဒီအချိန် အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ ခန့်မှန်းလိုက်မိတယ်။ ပင်တီထဲကို လက်ထည့်ပြီး သူ့ကိုယ်သူ ပွတ်လိုက်တိုင်း တဟင်းဟင်းနဲ့ ညည်းနေတယ်။ အဟဲ …. ကျွန်တော်ကလည်း ကြားဖူးနားဝနဲ့ အဖျားတက်တာ မဟုတ်မှန်း သိတာပေါ့ဗျာ။ နို့မို့ ဆရာဝန် ပြေးခေါ်ပေးမိနေမှ ခက်နေဦးမယ်။
ခဏကြာတော့ သူက ညီမလေးကို ပွတ်ရင်းနဲ့ ကော့ကော့လာတာ … ဒီအချိန် ဒရင်းမ်ဘက်သာ ပြုတ်ကျသွားလို့ကတော့ လှဦးမယ်လို့ ကြည့်နေရင်းနဲ့ မလိုတမာ တွေးမိသေးတယ်။ ချောင်းလို့ကလည်း လွတ်လပ်ပါတယ် … သူတို့ခေါင်းရင်းခြံက လူမနေတာ ကြာပြီကိုး။ နောက်ဆုံးတော့ အားလုံးကြားသိဖူးကြသည့်အတိုင်းပါပဲ … ဟင်းကနဲ သံရှည်ဆွဲလို့ ငြိမ်ကျသွား၊ မျက်လုံးလေးတွေကို ဖြည်းဖြည်းလေးဖွင့်လိုက်တော့ ကျွန်တော်လည်း အမြန်ဆင်းပြေးရတယ်။ ကြည့်ရတာ အချောင်းခံရမှန်း ရိပ်မိသွားပုံပဲ။
ကျွန်တော်တို့အိမ်က ခြေရင်းဘက်နှစ်ခြံကျော်မှာဆိုတော့ ပြေးရတာ လွယ်ပါတယ်။ အိမ်နောက်ဘက်ကနေ ပတ်ပြီး ပြေးတာပေါ့၊ ခြံစည်းရိုးတွေ ဘာတွေကလည်း ရှိတာမှမဟုတ်တာ … ဒီတိုင်းလေး နားလည်မှုတွေနဲ့ပဲ နေကြတာ။ အိမ်ပြန်ရောက်တော့ အိမ်သာထဲဝင်ပြီး တစ်လုံးလှိမ့်လိုက်တယ်။ နောက်လည်း သူငယ်ချင်းအိမ်သွားလည်ပါသေးတယ်။ သူငယ်ချင်းအစ်မနဲ့လည်း စကားပြောနှုတ်ဆက်နဲ့ပါပဲ … သူလည်း ကျွန်တော်မှန်းတော့ သိပုံမရပါဘူး။
စစချင်းအတွေ့အကြုံက ပစ္စည်းမမြင်လိုက်ရပေမယ့် တကယ့်မှတ်လောက်သားလောက်တော့ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ပေါ့ဗျာ …. ကန်သုံးဆင့်က အတွဲချောင်းတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေတော့ နောက်မှပဲ ပြောတော့မယ် . xxxx ကန်သုံးဆင့် … အဲ … ကန်သာယာပန်းခြံဆိုတာက ပုသိမ်ဟော်တယ်နဲ့ ဂေါက်ကွင်းရဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်ခြမ်းက လမ်းတစ်ဖက်မှာရှိတာ။ ကျွန်တော်တို့က ကျူရှင်ပြီးတဲ့အချိန် စက်ဘီးလေးတွေနဲ့ ကန်သုံးဆင့်ဘက်ကို ထွက်တတ်ကြတယ်။ စစချင်းတော့ အတွဲများရဲ့ ဘက်တော်သား ခွေးချီးတွေနဲ့ တော်တော်လေး ဒုက္ခရောက်ပါတယ်။
ကြာလာတော့လည်း သစ်ရွက်ထူထူ တွေ့ရင် တတ်နိုင်သလောက် မနင်းတော့ဘူး။ အဲဒီမှာမှ ရန်ကင်းတော့တယ်။ တကယ်အတွဲများတဲ့နေရာက ပန်းခြံထဲမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ပန်းခြံက ပိုက်ဆံလည်းပေးရ၊ နေရာတွေကလည်း သိပ်မကောင်းနဲ့မို့ ရည်းစားဖြစ်ကာစ အတွဲလေးတွေပဲ လာကြပြီးတော့ ချောင်းရတဲ့လူတွေလည်း သိပ်အဆင်မပြေဘူး။ အင်း … ပန်းခြံထဲက ထွက်ပြီး တစ်ဖက်မှာက တက္ကသိုလ်ရှိတယ်။ အဲဒီတက္ကသိုလ်စာသင်ဆောင်တွေရဲ့ အဆုံးမှာ ရွက်ကြွေတောကြီး ရှိတယ်။ အဲဒီမှာတော့ ခြုံတွေကလည်း ကောင်းတယ်။
အထဲကို တဖြည်းဖြည်းသွားရင်လည်း ကန်သုံးဆင့်ကမ်းစပ်မို့ အကာအကွယ်တစ်ဖက်ကတော့ အတွဲတွေအတွက် သေချာတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီနေရာကို တက္ကသိုလ်ကျောင်းတော်သူ ကျောင်းတော်သားတွေနဲ့ ဘိရှာမရတဲ့ စားသုံးသူအချို့လာတတ်ကြတယ်။ ပထမဆုံး အဲဒီကို စရောက်တော့ ခဲနဲ့အထုခံရတာပါပဲ။ ဒီကောင်ကလည်း ပစ်မလွဲဆိုတော့ ကျောကုန်းကို မှန်ပါတယ်။ တော်သေးတာပေါ့။ ခွေးချီးကိုင်ပြီး မပစ်လို့။ နောက်တစ်ခါကျတော့ အတွေ့အကြုံရင့် အစ်ကိုကြီးတွေနောက် လိုက်သွားတယ်။
ဒီတော့မှ ကိုယ်တွေ ကလေးတွေ ဘာမှားသလဲ သိတော့တယ်။ ချဉ်းကပ်ပုံ၊ လမ်းရွေးပုံ၊ ရှာပုံတွေကအစ တူကို မတူဘူး။ သူတို့နောက်လိုက်သွားတော့မှ စစချင်းဝင်တဲ့လမ်းက အတွဲတွေ ဘယ်လိုမှ မလာနိုင်တဲ့လမ်း၊ အဲဒီကနေ ဝင်ပြီး တဖြည်းဖြည်းနဲ့ လေးငါးခြောက်ခုရှိတဲ့ ခြုံဝိုင်းဝိုင်း၊ ကုန်းမို့မို့တွေဘက် ချဉ်းကပ်သွားကြတယ်။ တစ်ယောက်ကတော့ လမ်းခွဲပြီး သစ်ပင်တက်သွားတယ်။ မကြာပါဘူး။ ရေစပ်နဲ့အနီးဆုံး ခြုံဘေးက နှိုက်နေကြတဲ့ အတွဲတစ်တွဲကို သွားတွေ့တယ်။ ကိုယ်တွေ ချောင်းချောင်းချင်းပဲ သူတို့က ကိစ္စပြီးသွားတယ် ထင်ပါတယ်။
ကောင်မလေးကလည်း ထဘီကို ဖြန့်ဝတ်လို့ ဘဲကြီးကလည်း ပုဆိုးကို ဆွဲဆန့် ဟိုသုတ်ဒီသုတ် ရေစပ်နားမှာ။ ဒါနဲ့ပဲ အောင်မြင်စွာ ဆုတ်ခွာခဲ့တယ်။ တောရဲ့ အလယ်တည့်တည့်က ခြုံကိုလည်း ရောက်ရော အစ်ကိုကြီးက လက်လှမ်းကုတ်တယ်။ သူ့နောက် လိုက်ခဲ့လို့ ပြောလို့ တရွေ့ရွေ့ချီတက်လာခဲ့တယ်။ ခြုံထဲမှာတော့ တဟင်းဟင်းအသံက စပြီး ထွက်လာတော့တာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် မြင်ကွင်းက ဘေးတိုက်ကြီးဖြစ်နေတော့ သိပ်အဆင်မပြေ လှဘူး။ ဒါနဲ့ပဲ အစ်ကိုကြီးတစ်ယောက်က လှည့်ပတ်ချောင်းတယ်။
ကျွန်တော်ကတော့ အဲဒီနေရာကနေပဲ ဘာများထပ်မြင်ရဦးမလဲလို့ စောင့်ကြည့် နေခဲ့တယ်။ ဘဲကြီးက စားဘဲကြီးထင်တယ်။ ဆော်လေးကတော့ အရိုင်းလေးလိုပဲ။ အောက်ကနေ တွန့်တွန့်နေရင်း ဘဲကြီးလုပ်သမျှ ငြိမ်ခံနေတယ်။ သူ့ဘက် သိပ်မတုံ့ပြန်ဘူးပေါ့ဗျာ။ အဲဒီမှာ ဘဲကြီးက ဆော်ရဲ့တီရှပ်ကို ဆွဲလှန်လိုက်တော့ ဘရာစီယာဖြူဖြူလေးကို စမြင်ရတယ်။ ပြီးတော့ လက်သွက်သွက်နဲ့ပဲ ဘရာစီယာကိုပါ တွန်းတင်လိုက်တယ်။ ရေနွေးကြမ်းပန်းကန်လုံးလောက်ပဲ ရှိမယ် ထင်တယ်။ ထိပ်ကလေးတွေကတော့ နီညိုညိုရယ် ….။
နောက်မှ နေရာရွှေ့သွားတဲ့ အစ်ကိုကြီးကို ပြောပြတော့ ငါမှားသွားတယ်တဲ့။ ဒါပေမယ့် ငါက အဝင်အထွက်ကို တစ်ချက်မြင်လိုက်ရတယ်တဲ့။ အမွှေးများလား နည်းလားလို့ မေးလိုက်တော့ သိပ်မရှိဘူးတဲ့ … ဟိုကောင်က ကွိုင်တော့စွပ်ထားတယ်တဲ့။ တဖြည်းဖြည်းဆောင့်ချက်တွေ ကြမ်းလာတော့ ဆော်ရဲ့ အော်သံကလည်း စိပ်လာတယ်။ ဘဲကြီးက လက်နဲ့ပါးစပ်ကို ပိတ်ထားပြီး ဆက်လုပ်နေတယ်။ မကြာပါဘူး … ဘဲကြီးလည်း တွန့်ကနဲ တွန့်ကနဲဖြစ်သွားပြီး ဆော်ပေါ်ကို ဖိပြီးငြိမ်သွားတယ်။
အဲဒီတော့မှ ကျွန်တော်လည်း တဖြည်းဖြည်းနောက်ပြန်ဆုတ်ပြီး ခဲသေးသေးတစ်လုံးနဲ့ပစ်လိုက်ပြီး စက်ဘီးရှိတဲ့ဘက် ထွက်ပြေးလာခဲ့တယ်။ အဲဒီတော့မှ တခြားလူတွေလည်း အထဲက အတွဲက လှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွားလို့ ထွက်ပြေးလာကြရသတဲ့။ အတွေ့အကြုံလေးကတော့ ဒါပါပဲကွယ် ….။ မောင်ညီမလေးတို့တွေလည်း မျှဝေနိုင်ကြပါစေ . xxxx အဟမ်းအဟမ်း၊ ကိုခေါင်းရှောင်သူ ရဲ့ အတွေ့အကြုံကိုဖတ်ရတာ မိုက်သဗျာ၊ အားကျတယ် ဟဲဟဲ ကျတော်လည်းအဲ့ဒိလိုနည်းနည်း ခပ်ဆင်ဆင်တော့ကြုံဖူးတယ် ၊
ဒီလိုဗျ ကျန်တော်၉ တန်းလောက်တုန်းကဗျ၊ နေ့လည်ထမင်းစားကျောင်းဆင်းချိန်ဆို ကျတော်တို့ ထမင်းဂျိုင့်ပါတော့ စားသောက်ပြီးရင်အချိန်က၄၅ မိနစ်လောက်ရသေးတယ် အမြန်စားတာလေ နောက်ပြီးရင်ကျောင်းအနောက်ဖက်မှာရှီတဲ့တောင်ပေါ်ကိုတက်တဲ့ဇောင်းတန်းလှေခါးမှာဆေးလိပ်သွားသောက်ကြတယ်၊ အဲ့ဒီဇောင်းတန်းရဲ့ဘေးမှာကားတွေဆိုင်ကယ်တွေတက်ဖို့လမ်းရှီတယ်ဗျ၊ ဖြစ်ချင်တော့ အတွဲတွေက အမြဲတမ်း ဆိုင်ကယ်လေးနဲ့လာလာလည်ကြတယ်ဗျာ၊
တောငျပေါဖကျတော့မဟုတျဘူး တောငျထိပျမရောကျခငျ လမျးခှဲလေးရှိတယျ အဲ့ဒီမှာကမ်ဘာလုံးကွီးနဲ့ ထိုငျစရာနရောတှရှေီတယျ၊ တဈရကျကတြော့ သူငယျခငျြးက ဟေ့ကောငျလာ အတှဲသှားခြောငျးမယျတဲ့ ကနျြတျောလညျးတဈခါမှာမခြောငျးဖူးဘူး လိုကျသှားတာပေါ့ စိတျဝငျစားတာကိုး၊ ဒါနဲ့ အဲ့ဒီကမ်ဘာလုံးဖကျ ရောကျတော့ ဆိုငျကယျတှေ့တယျ လူတှမေတှေ့ဘူး၊ ဒါနဲ့အဲ့ဒီကမ်ဘာလုံးဖကျကနေ လြှောဆငျးသှားတဲ့တောငျစောငျးတဈလြှောကျလမျးလေးလူသှားလမျးလေးကနတေိတျတိနျလေးသှားကွတော့ ခြံထူတဲ့ ဖကျကိုခဉျြးကပျလိုကျတော့
နည်းနည်းတော့ဝေးတယ် ဒါမေယ့်မြင်ရတယ် သူတို့တော့ ကျတော်တို့ကိုဘယ်မြင်လောက်ပါ့မလဲ သူတို့အလုပ်နဲ့ ရှပ်နေကြတာကိုးနောက်ပြီကိုယ်ကချောင်းတာလေ၊ ကောင်မလေးကိုမြေကြီးပေါမှာလှဲအိပ်ခိုင်းထားတယ် သကောင့်သားက အောက္မွက သစ်ရွက်တွေကြွေလို့ သစ်ရွက်မွေ့ယာလေးပေါ့၊ ကေင်မလေးက ထမိန်လေးကို မတင်ထားတယ် ဘဲကြီးကလှေထိုးကြီး ဗျဝင်လိုက်ထွက်လိုက်နဲ့ကောင်မလေးကတော့အသံမထွက်ရှာပါဘူး အံကျိတ်ခံတဲ့ပုံပါပဲ၊ ချောင်းရတာက အောကားကြည့်ရတာထက်တောင်ကောင်းပါ့ live ဆိုတော့၊
သိပ်မကြာပါဘူး ဒီကောင်ကြီးလည်း ဆောင့်ချက်တွေမြန်ပြီးပြီးသွားတယ်၊ မှိန်းနေသေးတယ်မခန့်တဲ့ကောင်၊ မနာလိုလိုက်တာ အဲ့တုန်းက ကိုယ်ကအဖြစ်မရှီသေးဘူးလေ၊ ဒါနဲ့သူတို့ထလာတော့ အကျီတွေဘာတွေသေချာခါနေရသေးတယ် သစ်ရွက်တွေအမှိုက်တွေကပ်နေတာကိုး၊ သူတို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်ပဲအသာလေး ပြန်လစ်ထွက်ပြိး အဲ့ဒီကမ္ဘာလုံးမှာထိုင်နေလိုက်တယ်၊ ၅မိနစ်လောက်နေတော့သူတို့ထွက်လာတယ်ဗျာ သူတို့ဆိုင်ကယ်ထားတာက ကမ္ဘာလုံးနားမှာကိုး၊
ကျတော်တို့နားရောက်တော့ သူတို့လည်းကျတော်တို့ထိုင်နေတာမြင်တော့ ဘဲကြီးကအောင်နိုင်သူအပြုံးလိုလိုဘာလိုလိုနဲ့၊ ကောင်မလေးကတော့ မျက်နှာလေးနီပြီးခေါင်းငုံထားတယ်ဗျာ မဆိုးပါဘူးအသားဖြူဖြူနဲ့ ရှမ်းမလေးတရုတ်စပ်နဲ့တူပါတယ်၊ ဒါနဲ့သူတို့လည်းဆိုင်ကယ်ပေါ်တက် ပြန်သွားကြပါလေရော ဒါနဲ့ကျတော်တို့သူငယ်ချင်းအဖွဲ့လည်းနောက်ဆို ထမင်းကို၅ မိနစ်လောက်နဲ့ပြီးအောင်စားတတ်တဲ့အကြင့်ကိုလုပ်ထားကြပါလေရော…….နောက်ပြီး သွားချောင်းမယ်လေ…
ဟဲဟဲ ကိုခေါင်းရှောင်သူရေ ကျတော်တို့ငယ်ငယ်ကမခင်တာနာတယ်ဗျာ……. xxxxx ငယ်ငယ်တည်းက မခင်တာ နာတယ်လုပ်မနေနဲ့ …. ခင်များ ခင်မိလို့ကတော့ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက် ချောင်းတာပဲများနေပြီး ဆယ်တန်းတောင် အောင်မယ် မထင်ဘူး ….. အေးဗျာ …. ကိုဇော်ရဲက ကိုးတန်းတုန်းက ကျောင်းမှာဆိုတော့မှ တစ်ခု ပြန်သတိရသေးတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စီနီယာ သဘောရှိတဲ့ ကျောင်းဆွေးလူဆွေး ပုဂ္ဂိုလ်အထီးအမများရဲ့ ဆယ်တန်းဆောင်အပေါ်ထပ်က အော်ဂီကို သွားသတိရလေရဲ့ ……….
အဲ … ကျွန်တော်ကလည်း ဆယ်တန်းပဲဗျ။ ဒါပေမယ့် မှန်မှန်ကန်ကန် တစ်နှစ်မှ မကျတဲ့ဆယ်တန်း … သူတို့ကတော့ ငါးတန်းတစ်နှစ်၊ ခုနစ်တန်းတစ်နှစ်နဲ့ ကျွန်တော်တို့နဲ့ ခုနစ်တန်းမှာ သွားတူတဲ့ အုပ်စုတွေ …. အခန်းတော့ ဘယ်တူမလဲဗျာ … တားက အေခန်း တူတို့က နောက်ဆုံးခန်းပေါ့ … ကြွားတာ ……… ကျွန်တော်က ဆယ်တန်းအေရဲ့ အနီအသင်းခေါင်းဆောင်ပါ။ တစ်ရက်ကျတော့ ကျွန်တော်တို့အသင်းတာဝန်ကျတဲ့နေ့ … သော့ကို ဆိုင်ရာဆိုင်ရာ အသင်းခေါင်းဆောင်တွေဆီ တစ်ညနေကြိုအပ်တော့ မနက်စောစောသွားဖွင့်၊
ရေခပ်၊ ပန်းအိုးလဲ စတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ရတယ်။ အဲဒီနေ့ကတော့ အိမ်မှာလည်း အဒေါ်နဲ့ နည်းနည်းကွိုင်တာနဲ့ ကျောင်းကို ရောက်နေကျအချိန်ထက် စောစောထွက်လာမိတယ်။ ကျောင်းရောက်တော့ ခုနစ်နာရီတောင် မထိုးချင်သေးဘူး။ စက်ဘီးကို စက်ဘီးရုံထဲထားပြီး ကျောင်းပေါ်တက်လာခဲ့တယ်။ စောနေတယ်ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့အခန်းနဲ့ နီးတဲ့လှေကားက မတက်ဘဲ တခြားတစ်ဖက်က ပတ်ပြီး တက်လာခဲ့တယ်။ အဲဒီဘက် အစွန်ဆုံးအခန်းက ဆယ်တန်းအိပ်ခ်ျ။ ကျွန်တော်လှေကားကို ကွေ့ကွေ့ချင်းပဲ အခန်းထဲကနေ ညည်းသံကြားလိုက်ရတယ်။
ဖြစ်ချင်တော့ ကျွန်တော်တို့ ကျောင်းက သရဲခြောက်တာကလည်း နာမည်ကြီး။ နည်းနည်းတောင် လန့်သွားတယ်။ ဒါပေမယ့် နေတောင်ထွက်နေပြီဆိုတော့လည်း မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီး အဲဒီအခန်းနားကို တဖြည်းဖြည်း ကပ်သွားမိတယ်။ အဲဒီမှာပဲ အခန်းနောက်ဆုံးထောင့်မှာ အတွဲတစ်တွဲကို တွေ့လိုက်ရတယ်။ ဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့ နာမည်ကြီးတွေပဲ။ ကျောင်းဆွေးတဲ့အထဲက နာမည်တော့ မပြောတော့ပါဘူးဗျာ …. တစ်ကောင်နဲ့ မိန်းကလေးကတော့ အင်း … သူကဗျာ … ရှစ်တန်းလောက်ထဲက မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ ရှိသင့်ရှိထိုက်တဲ့ပုံစံတွေရှိနေပြီမို့လို့
ကျွန်တော် သတိထားမိတဲ့တစ်ယောက်ဖြစ်နေတယ်။ အာမ်းချဲတွေနဲ့ ကာထားပေမယ့် ဘယ်လောက်လုံမှာ မို့လို့လဲ …. မိန်းမက အပေါ်က … ဟိုကောင့်ပေါ်ကို တက်လုပ်နေတာ။ ကျွန်တော်လည်း အခန်းနောက်ဘက်ပေါက်ကနေ ဆက်ချောင်းနေတယ်။ ကြည့်နေရင်းနဲ့ ကောင်မလေးက ညောင်းလာလို့ ထင်ပါရဲ့ ….. နှစ်ယောက်စလုံးပြန်ထရပ်လိုက်ပြီး ကောင်မလေးက ခုံနောက်တန်းပေါ် လက်ထောက်၊ ဟိုကောင်က နောက်ကနေ ကျုံးတော့တာပေါ့။ အဲဒီမှာ အဲဒီကောင်ကနေ ကောင်မလေးရဲ့ ဘော်လီကို အပေါ်ပင့်တင်လိုက်ပြီး လက်နဲ့ နို့တွေကို နယ်ရင်း ဆောင့်တော့တာ ….
ကျွန်တော်ဖြင့် သွားရည်တောင်ယိုလာတယ်။ နောက်တော့ သူတို့နှစ်ယောက် ခုံပေါ်ကို မှီပြီး ကုန်းကုန်းကြီးနဲ့ ငြိမ်နေကြလေရဲ့။ အဲဒီမှာပဲ နှစ်ယောက်စာအလေးကို မခံနိုင်တော့တဲ့ ခုံက ဝုန်းကနဲ ရှေ့ကို လဲကျရော ….. ကျွန်တော်လည်း ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ အခြေအနေ မဟန်တာနဲ့ လစ်လာခဲ့တယ်။ ဖြစ်ချင်တော့ ကိုယ့်ဖိနပ်ကိုယ်တက်နင်းပြီး အဲဒီဆယ်တန်းအိပ်ခ်ျရဲ့ ရှေ့တံခါးကို ဝင်ဆောင့်မိတယ်။ အုန်းကနဲ အသံထွက်လာလို့ သူတို့တွေလည်း အူယားဖားယားဖြစ်ကုန်ကြမယ်ဆိုတာကတော့ လှည့်မကြည့်ဘဲနဲ့ သိနေပါတယ်လေ ….
ဒါနဲ့ပဲ ကျွန်တော်လည်း ကော်ရစ်ဒါကနေဖြတ်ပြီး ဆယ်တန်းအေဘက် သုတ်ချေတင်ရတော့တာပေါ့။ နောက်နှစ်ရက်သုံးရက်လောက်ကတော့ ဟိုကောင်မလေးရဲ့ နို့နှစ်လုံးကို အနယ်ခံနေရတဲ့မြင်ကွင်းတွေပဲ မြင်နေမိတယ်။ နောက်မှ စိတ်ငြိမ်သွားတာ။ နောက်ပိုင်းတော့ဗျာ …. အဲဒီကောင်မလေးကို မြင်မိရင် ကျွန်တော်ဖြင့် ရယ်ချင်စိတ်က မထိန်းနိုင်ဘူး … သူကော ရိပ်မိမလားတော့ မသိဘူးလေ ….. ဆယ်တန်းအောက်စာရင်းထွက်ပြီးတော့ မကြာခင်မှာ ကြားရတာကဖြင့် အဲဒီနှစ်ယောက် ခိုးပြေးသွားပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဗျို့ ……….
ကျွန်တော်ကတော့ အများသူငါတွေထဲ ငါသိပါတယ်ဆိုပြီး အဲတော့မှ လိုက်ပြီး မောင်းခတ်တော့သဗျာ …….. ဟဟ ….. xxxxxx ကျွန်တော်လည်း ချောင်းတာ ဝါသနာ ပါပါတယ်ဗျ။ ချောင်းတယ်လို့ စပြီးသတ်မှတ်လို့ရတဲ့ကိစ်စက ၇နှစ်သားလောက်ဖြစ်ခဲ့တာဆိုတော့ သေချာတောင် မမှတ်မိတော့ဘူး။ နှစ်၂၀လောက်ရှိပြီကိုး။ အဲဒီတုန်းက ကျောင်းပိတ်ရက်ကြီး မိဘတွေကခရီးသွားတာလို့ထင်တယ်။ အသက်၂၉နှစ်လောက် အဒေါ်ဝမ်းကွဲတယောက် အိမ်မှာလာနေတယ်။(သေချာအောင်ခုအသက်ထဲက၂၀နှုတ်ထားတာပါ)။
ကျွန်တော်က ငယ်ငယ်တုန်းကသူရဲကောင်းဆိုတော့ ကိုယ့်အိမ်ထဲတောင်ကိုယ်တခါတလေ တယောက်ထဲ သွားရဲတာမဟုတ်ဘူး။ အဲဒီ့တုန်းကတှီဗွီမှာလာတဲ့ ရှောင်လေဝေးဝေး မူးယစ်ဆေးဆို တဲ့ အရိုးခေါင်းကြီးကို ကြောက်နေတာဗျ။ .နေ့လည်ဘက်ဆို ကျွန်တော်ကပုံမှန်အိပ်လေ့ရှိတယ်။ ၁နာရီခွဲလောက်တော့အသာလေးပဲထင်တယ်။ တနေ့ကျတော့ ကျွန်တော်နိုးလာတယ်။ ကြောက်ပြီးအောက်ထပ်ဆင်းပြေးတယ်။ ကျွန်တော်ဘာလို့ အန်တီလေးနာမည် အော်မခေါ်မိလည်းမစဉ်းစားတတ်ဘူး။
အိမ်ရှေ့မတွေ့ဘူး။ နောက်ဖေးထဲလည်းဝင်ကော ဘွားဆိုတွေ့တယ်ဗျ။ ရေချိုးခန်း တံခါးကြီးဖွင့်ထားတယ်။ အန်တီလေးက ကိုယ်တုံးလုံးကြီး ကျွန်တော့်ကိုကျောပေးထားတယ်။ ဘယ်လိုပုံကြီးလဲ ကျွန်တော်ကောင်းကောင်း တကယ်မမှတ်မိတော့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သေချာတာကတော့ ကြည့်လို့တအားကောင်းတယ်ဗျာ။ ဖင်လုံးကြီးတွေက ရေတွေစိုပြီးတော့ ပြောင်ပြောင် ပြောင်ပြောင်ကြီးနဲ့ အကြီးကြီးတွေ။ ကိုယ်ကလူလေးသေးနေသေးလို့ အဲလိုလူကြီးဖင်ကြီင်္းတွေ့တာကို ထူးဆန်းနေတာထင်တယ်။
အဲဒီ ဖီလ်လင်မျိုးကကျွန်တော်လူပျို ပေါက်ဖြစ်တဲ့ထိ ကိုယ်ရွယ်တူကောင်မလေးတွေ ထက်ပိုကြီးတဲ့ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ တင်ပါးပြောင်ပြောင်ကြီးတွေမြင်တိုင်းခံစားရတယ်။ အဲတုန်းကတော့ ဘာစိတ်နဲ့ကြည့်နေမိလဲ မသိဘူး။ တော်တော်ကြာတဲ့ အထိကျွန်တော်မီးဖိုချောင် တံခါးဝနားနေကုတ်ကုတ်ခလေး ကြည့်နေမိတယ်။ အန်တီလေး ဒီဘက်လှည့်မလိုလဲဖြစ်ကော ပြန်ပြေးထွက်လာကော။ ခုထိကျွန်တော် အဲဒီပုံရိပ်ကိုသေချာ ပြန်စဉ်းစားတယ်။ ဖင်ဆုံကြီးတွေက ကြီးကြီး လုံးလုံး လှုပ်စိစိကြီး အသည်းယားစရာကြီး ဆိုတာကလွဲရင် ပုံရိပ်တော့ပြန်ပေါ်မလာတော့ဘူးဗျ။
ကျွန်တော် ပထမဆုံးအားရပါးရ စချောင်းဖြစ်တာက ၇တန်းရောက်မှပါ။ အဲတုန်းက ချောင်းချင်နေတာ ၁နှစ်လောက်ရှိပြီးမှ တကယ်အကောင်အထည်ဖော်ဖြစ်တာ။ ငယ်ငယ်တုန်းမိန်းမကိုယ်လုံးဆိုလို့ မျက်စိနဲ့တပ်အပ်မြင်ဖူးတာ ခလေးမလေးတွေရွယ်တူတွေအဝတ်လဲတာ ရေချိုးတာ၊ ပိစိကွေးဘဝက အမဝမ်းကွဲပိစိကွေးတွေရေတူတူချိုးတုန်းကနေမြင်ဖူးတာတွေ လောက်ရှိတာ။ အန်တီလေးကြတော့လည်းဖင်ကြီးကိုပဲတွေ့လိုက်ရတယ်။ ၅တန်း ရောက်တော့ ကျူရှင်မှာ၆တန်းမမတွေ ဖင်ချွတ်ခံရတာ စမြင်ဖူးတယ်။
၆တန်းပြီးတော့ တအားတွေ့ဖုးချင်နေပြီ။ အဖြစ်နိုင်ဆုံးကရေချိုးခန်းဆိုတာလည်း စဉ်းစားမိတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အိမ်မှာ ရေချိုးခန်းနဲ့ အိမ်သာကကပ်ရပ်။ အပေါ်မှာသစ်သားတန်းတွေ တင် ထားပြီးတန်းတွေပေါ်မှာမှရေတိုင်ကီရှိတယ်။ အိမ်သာခန်းကကျင်းတော့ နံရံကိုခြေကန်ပြီး သိုင်းကားထဲမှာတက်သွားလို့ရတယ်ဗျ။ လူကလည်းပိန်ပြီး ပေါ့သေးတာကို။ အပေါ်ရောက်ရင် လေထွက်ပေါက်ဘောင်ပေါ်ကိုခြေတဖက်နဲ့နင်း လက်ကထုပ်တန်းကိုကိုင် ခေါင်းကိုထုပ်တန်းကြားထဲထား ကြည့်ရင် ရေချိုးခန်းထဲကို ကောင်းကောင်းမြင်ရတယ်။
အဲဒီတုန်းက သေသေချာချာ ပြင်ဆင်တာ။ ခဏခဏတက်ကြည့်တယ်။ ရေချိုးခန်းထဲသွားပြီးတော့လည်း အဲဒီ့ဘက်ကိုပြန်မော့ကြည့်သေးတယ်။မြင်ရမလားလို့ ။ အပေါ်ဘက်ကကိုင်ကီနဲ့ထုပ်တန်းကြားလည်းဖြစ်၊ ရေချိုးခန်းထဲမှာကမီးချောင်းလည်းထွန်းထားတော့ အလင်းအမှောင်အရမမြင်ရဘူး။ ချောင်းဖို့အတွက်တော့ ကောင်းကောင်းစိတ်ချရတယ်ပေါ့။ ချောင်းလည်းချောင်းချင် မိမှာလည်းကြောက်ပေါ့ဗျာ။ သေချာစောင့်နေကာမှ ရေချိုးမယ့်သူက မလာဘူးဗျာ။ ၇တန်းနှစ်စမှာ ဂွင်းစတိုက်တက်တော့ လာလို့ကတော့အပိုင်ပဲဆိုပြီးစောင့်တာ။
ဈေးဦးစပေါက်သွားတာကတော့ အမေ့ဧည့်သည်ဗျ။ အသက်က၃၅-၄၀လောက်ရှိတဲ့ အပျိုကြီး။ ဘာကိစ္စနဲ့လာလဲတော့ မသိတော့ဘူး။ မိုးမိလာပြီးရောက်လာတာ။ သူ့ကိုအမေက ရေချိုးအဝတ်လဲသွားလိုက်ပါလားလို့ပြောတော့ ကျွန်တော့မှာ ချိုးပါစေချိုးပါစေ ဆိုပြီး ဆုတောင်းလိုက်ရတာ။ ဆုတောင်းပြည့်သွားတယ်ဗျ။ ကျွန်တော်လည်း သူရေချိုးခန်းထဲဝင်ပြီး သိပ်မကြာခင် အိမ်သာထဲဝင် လေ့ကျင့်ထားအတိုင်းတွယ်တက်။ ရင်တွေကလည်းတဒိန်းဒိန်းခုန်၊ အာခေါင်တွေလည်းခြောက် ကောင်းကောင်းမှတ်မိသေးတယ်ဗျာ။
သစ်သားတန်းကြားခေါင်းဝင်ပြီး အသာကျော်ကြည့်လိုက်တော့။ တွေ့ပါပြီ ကျွန်တော်သိပ်တွေ့ချင်ခဲ့တဲ့ အရွယ်ရောက်ပြီး မိန်းမဖင်တုံးလုံးကြီး။ အဝတ်တစမှ မရှိတဲ့ ကိုယ်လုံးကြီးက ပြောင်ရှင်းနေတာပဲ။ ရေတွေရွှဲနေလို့လည်း ပိုပြီးတော့ကြည့်ကောင်းနေတာဖြစ်မှာပါ။ အုတ်ကန်ကအိမ်သာနဲ့ ကပ်ရပ်မဟုတ်တော့ ပိုကောင်းတယ်ဗျ။ ကျွန်တော့်ဘက်ကနေ အကုန်မြင်ရတယ်။ ကျွန်တော့်ဘက်ကို ဘေးတဇောင်း မျက်နှာမူထားတော့ နို့ကြီးတွေနဲ့ စောက်ဖုတ်ကိုကောင်းကောင်းတွေ့ရတယ်။
ရေခပ်လိုက်တိုင်း နို့ကြီးတွေ လှုပ်စိလှုပ်စိနဲ့။ ဂွကြားမှာကတော့ စောက်ဖုတ်မဲမဲလေး။ အမွှေး သိပ်မထူဘူးဗျ။ ရေစိုလို့စုနေတာမှန်ပေမယ့် သိပ်မများလှတာ အသေအချာပဲ။ လူနည်းနည်းလှည့် လိုက်ရင် ဖင်ပြောင်ကြီးကိုတွေ့ရတယ်။ ရေစိုနေတဲ့ ဖင်လုံးကြီးတွေက တုန်တုန် တုန်တုန်ကြီးတွေ။ ကျွန်တော်စိတ်မထိန်းနိုင်တော့ဘူး။ လက်၁ဖက်နဲ့ပဲ တန်းကိုကိုင်ပြီး နောက်တဖက်က ညီလေးဆီရောက်သွားကော။ ဘယ်နှချက်မှ မလုပ်လိုက်ရဘူး။ အန်တီ ကိုယ်တုံးလုံးကြီးကို ကြည့်ပြီး ကျွန်တော်ထွက်ကုန်တာ။
ကျွန်တော် ဒုတိယအကြိမ် ဂွင်းတိုက်တာကို အကောင်းဆုံးသတ်မှတ်ထားတာထက်( ပထမတခေါက်က ဘာတွေမှန်းမသိကြောက်သွားလို့) ကိုအများကြီး ပိုကောင်းတဲ့ ဖီလ်တွေ့သွားတယ်။ အောက်ပြုတ်မကျအောင်တောင်တော်တော်ထိန်းယူရတယ်။ ပြီးတော့လည်း အန်တီကြီးရေချိုးပြီးတဲ့ အထိ ဆက်ကြည့်နေလိုက်သေးတယ်။ သိပ်ကြာကြာ မချိုးဘူးပြီးသွားတယ်။ ပြီးတော့လည်း လဲမယ့်အဝတ်ကို တခါတည်း ရေချိုးခန်းထဲမှာတင် အပြီးဝတ်တာ။ အပျိုကြီး တော်တော်အရှက်ကြီးပုံရတယ်။
ဟဲဟဲ အောက်ခံဘောင်းဘီတော့ မဝတ်ဘူးဗျ။ ငှားမဝတ်ချင်လို့ဝင်တယ်။ ကျွန်တော်လည်းပြီးတော့မှ အောက်ဆင်းတော့မှတွေ့တာ သောက်ကျိုးနဲ နံရံမှာအကွက်လိုက်ကြီးတွေ ရေလောင်းထားသလိုရွှဲနေတာ။ သုတ်လို့လဲမရ ရေလောင်းဆေးလိုက်ရင်လဲ ပိုဆိုးကုန်မှာဆိုးတာနဲ့ ခြောက်တဲ့အထိအိမ်သာထဲ ထိုင်နေလိုက်ရတယ်။ ကျွန်တော်ပထမဆုံး မျက်စိနဲ့တပ်အပ်မြင်ဖူးတဲ့ ဝတ်လစ်စလစ်မိန်းမ ကိုယ်လုံးကြီးပါ။ xxxxx ကျွနတော် 8တန်းနှစ်လောက်က ပေါ့။ ဟိုဘက်အခန်းက မမလှလှ တစ်ယောက်ကို ချောင်းကြည့်ဖူးပါတယ်။
အဲဒီမမ က ကျွန်တော် ရဲ့ ပထမဆုံးမြင်ရတဲ့ဖုတ်ဖုတ်ပေါ့ ။အဲဒီအမကြီးက ကျွန်တော်ထက်6နှစ်လောက်ကြီးတာပေါ့။ ကျွန်တော်တို့ ကဝန်ထမ်းအိမ်ရာဆိုတော့ အိမ်တွေက တည်ဆောက်ပုံတူကြတယ်လေ။ ဒီဘက်ကရေချိုးခန်းဆို ဟိုဘက်မှာလဲ ရေချိုးခန်းဘဲ။ အဆင်ပြေချင်တော့ ကျွန်တော်တို့ အိမ်ရေချိုးဘက်ကနေကြည့်ရင် ဟိုဘက်ရေချိုးခန်းပေါ့ ။နောက်ဖေးဘက်မှာဘဲ။အဲဒီတော့ ဇာတ်လမ်းကစပြီ။ ဘေးခန်းက အမလှလှ တစ်ယောက်ရေချိုးသံကြားရင် မမေနိုင်တော့ဘူး။ ရေချိုးခန်းကန်ဘောင်ပေါ်က တက်ကြည့်ရတာအမော်။
ဘဝမှာ ဖုတ်ဖုတ်လေးကို စတွေ့ ရတာပေါ့ လေ သူမ ကတော့ ဘယ်သူမှမရှိဘူးဆိုပြီး စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ်ချိုးနေတာပေါ့ ။အဲဒီလိုချောင်းချောင်းနေတာ6လလောက်မှ အဲဒီအမကြီးတို့ ပြောင်းသွားတော့မှ ဘဲ ရပ်သွားတော့တယ်ဗျား လွှမ်းမောရပါသော မမ ဖုတ်ဖုတ်ရယ် ကောင်မလေးနှစ်ယောက်အကြောင်း တစ်ရက် ကျနော် ဝရန်တာမှာ ဂစ်တာတီးနေတုန်း အိမ်ရှေ့တိုက်က လှုပ်ရှားမှုတွေ့လို့ ကြည့်လိုက်တော့ လူသစ်တွေပြောင်းလာတဲ့ အခန်းမှာ ကောင်မလေးတစ်ယောက် တံမြက်စည်း လှဲနေတာ။
သူ့အောက်ပိုင်းကို ကြည့်လိုက်တော့ ဘောင်းဘီက အသားကပ်ဘောင်းဘီလိုမျိုး။ မဟုတ်သေးဘူး ဆိုပြီး သေသေချာချာကြည့်လိုက်တော့မှာ ဘောင်းဘီမပါဘူး။ အတွင်းခံဘောင်းဘီနဲ့ တီရှပ်လေးနဲ့ပဲ။ ကျနော်လည်း ကြည့်ကောင်းကောင်းနဲ့ ထိုင်ကြည့်နေလိုက်တာ သူ လှဲချပြီး အိပ်လိုက်တော့မှ ကျနော့်မြင်ကွင်းက ပျောက်သွားတယ်။ သူတို့ တိုက်ခန်းက အထဲမှာ အခန်းမဖွဲ့ထားဘူး။ ကျနော့်အိမ်က အပေါ်စီးက ဆိုတော့ သူတို့ နောက်ဖေး ရေချိုးခန်းနားအထိ မြင်နေရတယ်။
ပတ်ဝန်းကျင်မှာ စုံစမ်းကြည့်တော့ စားသောက်ဆိုင်က ကောင်မလေးနှစ်ယောက် ငှားနေတာလို့ ပြောပါတယ်။ စပွန်စာကောင်းလို့နေမှာပေါ့။ ဒီလိုနဲ့ နောက်ရက်ကျတော့ သူတို့ လှုပ်ရှားတတ်တဲ့ အချိန်တွေကို စောင့်ကြည့်တော့ အလုပ်သွားခါနီး ညနေငါးနာရီခွဲ ခြောက်နာရီလောက်ဆို သူတို့နှစ်ယောက် ပြင်ဆင်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။ အဖြူနဲ့အညိုပေါ့။ တစ်ယောက်ကဖြူတယ် တစ်ယောက်က ညိုတယ်။ အဖြူက ထလာတယ်။ ပြီးတော့ အဝတ်တွေချွတ်ချပြီး ရေချိုးခန်းထဲဝင်သွားတယ်။
အညိုကိုတော့ မတွေ့ရဘူး။ အဖြူ ရေချိုးခန်းထဲက ထွက်လာပြီး အိမ်အလယ်နားက နံရံကပ်မှန်မှာ ရေသုတ်တယ် အလှပြင်တယ်။ အဲ့ဒီတော့မှ အညိုက ထလာတယ်။ အဝတ်အစားတွေချွတ်တယ်။ သူ့ကိုယ်လုံးကို ဘီရိုကမှန်မှာ သေချာကြည့်တယ်။ ကြည့်လို့အားရတော့ အလှပြင်နေတဲ့ အဖြူဆီကနေ ထမီကို ဆွဲယူလိုက်တာ ထမီပါလာတယ်။ အဲဒီတော့မှသိတာက အဖြူက ထမီကို ဝတ်ထားတာမဟုတ်ပဲ ပတ်ထားတာပဲ။ ထမီဆွဲယူတော့ အဖြူက အလှပြင်တောင် မပျက်ဘူး။ ကိုယ်တုံးလုံးလေးနဲ့ ကျန်နေခဲ့ရော။
အညိုကတော့ ထမီကို တာဝန်ကျေပတ်ပြီး ရေချိုးခန်းထဲ ဝင်သွားလေရဲ့။ နောက်တော့ အညိုလည်း ထွက်လာပြီး အလှပြင်နေတုန်း စားသောက်ဆိုင်က လာကြိုတဲ့ကားရောက်လာတယ်။ အဲဒီမှာ ဝရုန်းသုန်းကားနဲ့ အကျီတွေဝတ် ပစ္စည်းတွေယူပြီး သူတို့အလုပ်ကို သွားကြပါတယ်။ ညကျတော့ ၁၁နာရီခွဲနဲ့ ၁၂နာရီကြားကို သူတို့ ပြန်ရောက်လာတယ်။ ပြန်ရောက်တယ်ဆိုတာနဲ့ အညိုက ဝတ်လာတဲ့ စကတ်လေးချွတ်ချပြီး အကျီချွတ် ဘရာလေးချွတ်၊ ပြီးတော့ တန်းမှာလှန်းထားတဲ့ တီရှပ်လေး ကောက်စွပ်ပြီး နောက်ဖေးထမင်းစားစားပွဲမှာ ထမင်းစားဖို့ပြင်တယ်။
အဖြူကတော့ အကျီနဲ့ ဘောင်းဘီချွတ်ပြီး အတွင်းခံတွေနဲ့ပဲ ပစ္စည်းတွေ ဟိုထားဒီထားလုပ်နေတယ်။ အဖြူက ဘရာစီယာ မဝတ်ဘူး ဘောလီဝတ်တယ်။ ဘော်လီနဲ့ အတွင်းခံနဲ့ပဲ။ နောက်တော့ အဖြူလည်း အညိုနဲ့အတူ ထမင်းစား။ ပြီးတော့ ကက်ဆက်ဖွင့်ပြီး သီချင်းဆိုကျင့်ကြတယ်။ အဖြူကတော့ ငြိမ်ငြိမ်လေး ထိုင်ဆိုပေမယ့်၊ အညိုကတော့ ဘီရိုရှေ့ကမှန်မှာ ခေါင်းဖြီးတဲ့ဘီးကို မိုက်လိုကိုင်ပြီး ဟန်နဲ့ပန်နဲ့ ဆိုင်မှာဆိုသလို လိုက်ဆိုတယ်။ နောက်တော့ သူတို့ ငြိမ်သွားကြတယ်။ အိပ်သွားတယ်ထင်ပါရဲ့။
ကျနော့်အိမ်က မြင်ရတာက သူတို့အိမ်က အလူမီနီယမ်မှန်တံခါးဆိုတော့ သူတို့ အထဲက မီးဖွင့်ချိန်မှ မြင်ရတယ် ဒီတော့ ညနေစောင်းနဲ့ ညပိုင်းပဲ မြင်ရတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ တစ်အားပူတဲ့နေ့တွေဆို အဖြူကမှ ပန်တီးလေး ဝတ်ထားသေးတယ်။ အညိုကတော့ တုံးလုံးနေပြီး ခေါက်ပက်လက်ကုလားထိုင်မှာ ကားကားကြီး အိပ်နေတာတွေ့ရတယ်။ ပြန်လာလို့ရှိရင်လည်း အကုန်လုံးဆွဲချွတ်ပြီး ရေထပ်ချိုးကြတာကို တွေ့ရတယ်။ ရေချိုးခန်းထဲက ထွက်လာရင် တစ်ခါတစ်လေ အကျီလေးတွေနဲ့နေပေမယ့် များသောအားဖြင့် အောက်က ဘာမှမဝတ်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။
ချောင်းကြည့်ရတဲ့ ရင်တွင်းခံစားမှုကတော့ ပထမဆုံး ဒီလိုမျိုး ကြုံဖူးတာဖြစ်လို့ ညီလေးကနိုးတာထက် စိတ်တွေလှုပ်ရှားပြီး ရင်တွေခုန်တယ်ဗျာ။ သူတို့လည်း အဲ့ဒီတိုက်ခန်းမှာ ကြာကြာမနေလိုက်ပါဘူး။ ၆လပဲကြာပြီး နောက်တစ်နေရာကို ပြောင်းသွားကြလေရဲ့။ ကျနော်ငယ်ငယ်တုန်းက စမ်းချောင်းမှာနေတုန်းကပေ့ါဗျာ…. ခေါင်းရင်းအိမ်မှာ ညီအစ်မ ၃ ယောက် ၊ ခြေရင်းအိမ်မှာ ညီအစ်မ ၃ ယောက် ၊ အိမ်ရှေ့အိမ်မှာက အိမ်တိုင်းမိန်းခလေး ၁ ယောက်စီ နေကြတယ် ပေါင်း ၉ ယောက်ပေ့ါ…အိမ်ရှေ့အိမ်ကတော့ ရည်းစားပါ။
သူကတော့ အခုတော့ ဘယ်တိုင်းပြည်ရောက်နေလဲမသိဘူး ( ကြေငြာတာ ) ကောင်မလေး ၆ ယောက်ကို ဆိုက်ဒ်စုံချောင်းရတာ….လူလည်း ခေါင်းပဲကျန်တော့တယ်….ဟီးးးးး နောက်ရက်မှ ပြောပြမယ်….အခုကအချိန်မရတော့လို့..တက်တာာာ ဟယ် ကိုပေါနှယ် ခက်ကပီကော ပသို့ပြုရပါခြိမ့် မယုံမေးကြည့် ဂဠုံဒွေးကျိ အဲ…စောတီး.. ပုံတစ်ပုံရှိတယ်ဆိုတာ ချစ်ချစ်ကြီးတို့ ချောင်းသာမှာ ဝစ်လစ်စလစ်ဖြစ်တုန်း မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ပုံပါ။ ဟိုကောင်မလေးနှစ်ယောက် အကြောင်းတော့ ချောင်းကြည့်တဲ့အခန်းမှာ သေချာရေးပါ့မယ်။
မှတ်တမ်းဘာလို့ မတင်ခဲ့တာလဲဆိုတော့ အဲ့ဒီအချိန်က အိုင်မေး နုစဉ်အခါ ဆယ်တန်းအောင်ပြီးစကာလဆိုတော့ Digital ကင်မရာဆိုတာက မူးလို့ရှူရလောက်အောင် မြန်မာပြည်မှာ မပေါ်သေး။ ဖလင်နဲ့ ရိုက်မယ်ဆိုရအောင်လည်း အဲဒီအခန်းကို လှမ်းဆွဲပြီး ကြည့်နိုင်လောက်တဲ့ Zoom ကောင်းကောင်းဖလင်ကင်မရာက မပိုင်။ ငှားရမ်းပြီး ရိုက်ဖို့ကလည်း အပေါင်းအသင်းထဲမှာလည်း မရှိ။ မှီသလောက်လှမ်းရိုက်မယ်ဆိုပြန်တော့လည်း ဖင်ပြောင်သော မိန်းကလေးတို့ပုံကို ဆိုင်မှာပုံသွားထုတ်ရဲလောက်အောက် သတ္တိကမရှိသေးတော့ ကိုပေါစွပ်စွဲသလိုပဲ တစ်ကယ်မတင်နိုင်လို့ မယုံလည်း ခံရမှာပါပဲ ကိုပေါရယ်။
တူတူချွတ်တယ် ဆိုလို့ပြောပါဦးမယ် ကျတော်ကအမြဲတမ်း တော့မဟုတ်ဘူး တစ်ပတ်တစ်ခါလောက်တော့ ကောင်မလေးနဲ့ရေတူတူချိုးတယ် ဗျာ ကျောကုန်းတွေတိုက်ခိုင်းတယ် ညီလေးကို သေသေချာချာဆေးခိုင်းတယ် ကိုယ့်ဖာသာကိုယ့်ဆေးတာနဲ့ ဘာမှ မဆိုင်တာဗျာ..အဲ့ဒါကတော့ အမြဲလိုလိုလုပ်နေကြပါ…ဟော်တယ်တွေမှာဆိုရင်တော့ ပိုချိုးလို့ကောင်းပါ၏.. bathtub လေးနဲ့ဆိုတော့ xxxxx ကျွန်တောပြောထားဖူးတဲ့ ကျွန်တော့်ချစ်ချစ် အပျိုဖြစ်ပြီးမှ တခြားမိန်းခလေးတွေနဲ့ တုံးလုံးချွတ်ပြီး ရေ၄ခါချိုးဖူးတဲ့ဟာတွေ။
သူ့အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းနဲ့တော့မပါဘူး။ သူတို့၂ယောက်ကတယောက်ကိုတယောက်ရှက်ကိုမရှက်တော့တာ။ ခဏခဏချိုးနေတာ။ ဒါကပထမဆုံးအခေါက် သူပြောပြတဲ့အတိုင်းရေးထားတာပါ။ ကျွန်တော့်စော်ကြီး ၈တန်းပြီးတုန်းကပေါ့။ သူတို့အဖေဘက်ကမြို့ကို အလျူကြီးရှိလို့ပြန်ကြပါတယ်။ အနယ်နယ်အရပ်ရပ်က အမျိုးတွေစုံတယ်ပေါ့နော်။ မောင်နှမဝမ်းကွဲတွေလည်း တွေ့ကြတယ်ပေါ့။ လူတွေကလည်းများတော့ ရေချိုးတော့ညီအမ တသိုက်ပေါင်းချိုးကြတယ်ပေါ့ဗျာ။ မြို့ခံအကြီးဆုံးအမက၁၀တန်းဖြေထားတယ်။
ချစ်ကြီးက ဒုတိယအကြီးဆုံးပဲ ၈တန်းဖြေထားတာဆိုတော့။ ကျန်တာတွေကတော့ ငယ်သေးတယ်။ စုစုပေါင်း ၆ယောက်ပေါ့။ နယ်ကရေချိုးခန်းဆိုတော့ ခြံထဲကအုတ်ကန်ကို ဝါးထရံနဲ့ ပတ်ပတ်လည်ခတ်ပြီးကာထားတာတဲ့။ အထဲရောက်တော့ အငယ်မလေးတွေက အဝတ်တွေချွတ်တယ်ပေါ့နော်။ သူကတော့ မငယ်တော့ဘူးပေါ့။ အပျိုလည်းဖြစ်ပြီသား၊ အမွှေးလည်းထွက်နေပြီဆိုတော့ ထမီလေးရင်လျားပြီးချိုးမယ်လို့ စဉ်းစားတာ။ အဲဒီအချိန်မှာ အမအကြီးဆုံးက အတွင်းခံပါမကျန် ဝတ်လစ်စလစ်ချွတ်ပါတယ်။
အဲဒါနဲ့ပဲ သူလည်း အမကတောင်ချွတ်မှတော့ ငါလည်းဝတ်မချိုးတော့ပါဘူးလေ ဆိုပြီး ရှက်ရွံ့စွာနဲ့ပဲ ထမီကိုဖြေကာ တန်းပေါ်တင်ပါသတဲ့။ အငယ်လေးတွေက တော့စစချင်းတော့ ဖင်တုံးလုံးကြီးနဲ့ သူတို့၂ယောက်ကို ကြည့်ပြီးတခွိခွိပေါ့။ သူ့မမဝမ်းကွဲကတော့ လုံးဝအပျိုကိုယ်လုံးကြီးဖြစ်နေပြီ။ သူကတော့ နို့လေးတွေကတော့သေး သေးတယ်။ ဖင်ကတော့ အလုံးလိုက်ဖြစ်နေပြီ။ သူကငယ်ငယ်တည်းက ဖင်ကြီးတာ။ စောက်ဖုတ်ကြီးကကြတော့ မို့မို့ခုံးခုံးကြီးဖြစ်နေပြီ ဒါပေမယ့်စောက်မွှေးလေးတွေကတော့ ထိပ်စုလေးပေါ့။
ချုံမထူသေးဘူး။ ကျွန်တော်လည်းသူအဲဒီအရွယ်တုံးက ဓါတ်ပုံတွေကြည့်ရင် လူကအရပ်ပုသေးတယ်။ ရင်ဘတ်လေးလဲ ပြားချပ်ချပ်နဲ့။ ဒါပေမယ့်အိုးကတော့ကားထွက်နေတာပဲ။ ပြီးတော့ညီအမ တတွေပျော်ရွှင်စွာရေကစားကြပါလေရော။ ကလေးတွေကြားထဲသူတို့၂ယောက်ကတော့ ဖင်ကြီးတရမ်းရမ်းနဲ့နေမှာပေါ့။ အမအကြီးဆုံးက တယောက်ချင်းဆီကို ဆပ်ပြာတိုက်ပေးတယ်။ ၂နှစ်ပဲငယ်တဲ့သူ့ကိုလည်းတိုက်ပေးတယ်တဲ့။ ကျွန်တော့်စော်တော့ပြောပါတယ်။
နို့တွေဖင်တွေကို တိုက်ပေးတုန်းကဆို ရင်ထဲကလိကလိနဲ့ ဘယ်လိုချည်းမှန်းကိုမသိပါဘူးတဲ့။ (အဖုတ်ကိုတော့မတိုက်ပေးဘူးတဲ့ အဟင့်) ပြီးတော့အဲတုန်းက သူကြောက်နေတာက နယ်ကရေချိုးခန်းဆိုတော့ ဟိုနားအပေါက်ဒီနားကအကွဲနဲ့ မလုံခြုံမှာစိုးနေတာ။ အပြင်မှာကလည်းအမျိုးတွေ တရုန်းရုန်းနဲ့ကို။ အပြင်ကနေ မြန်မြန်လုပ်လို့လာပြောတဲ့သူကပြော။ ဘေးနားကလဲ ဖြတ်သွားတဲ့ ခြေသံတွေကလည်းရှုပ်နေတော့ အထဲမှာ တုံးလုံးကြီးနဲ့ စိတ်မလုံဘူးတဲ့။ xxxxx ကျွန်တော့်ချစ် ဆေးကျောင်းတုန်းtrip ထွက်တုန်းကတော့ ရေတူတူချိုးကြတဲ့အခါချိုးတယ်။
ဒါပေမယ့်သူ့ချိုးနေကျသူငယ်ချင်းနဲ့ လွဲရင်ကျန်တဲ့သူတွေနဲ့က ဆက်စပိုင်နာနဲ့ ဘရာဇီယာဝတ်ချိုးတာဆိုတော့ အပေါ်က ၄ခုထဲအကျုံးမဝင်လို့ နောက်မှပဲရေးတော့မယ်။ နောက်တခေါက် အများကြီးတူတူတုံးလုံးချွတ်ချိုးကြတာက သူဆရာဝန်မပေါက်စဟောက်စ်ဆာဂျင်ဖြစ်မှဗျ။ သူတို့တတွေ လှည်းကူးသွားကြရတယ်။ တာဝန်အရသွားရတာတဲ့ ၂ပတ်နေရတယ်။ အနီးအနား သွားပြီးကွင်းဆင်းတာတွေလည်းလုပ်ရတယ်။ ဒီအထဲကညီအကိုဆရာဝန်တွေတော့သိမှာပေါ့။ အကုန်သွားရတယ်ပြောတာပဲ။
အဲတော့သူငယ်ချင်းတွေ အုပ်လိုက်ကြီးတူတူ နေကြရတယ်ပေါ့။ သူတို့အခေါက်တုန်းက မိန်းခလေးတွေ ၂၀လောက်ပါသွားတယ်။ မိန်းမအင်အားများတယ်ပေါ့။ သူတို့နေရတာက ရန်ကုန်၊ပဲခူး လမ်းမကြီးပေါ်က ဝင်းထဲမှာဗျ။ ၂ထပ်အဆောင်ကြီးနဲ့။ ကျွန်တော်တောင် ဘာမှဝေးတာမဟုတ်လို့ ခဏခဏသွားလည်လိုက်သေးတယ်။ မိန်းခလေးတွေက အောက်ထပ်မှာနေရတယ်။ သူတို့နေတဲ့ ဟိုဘက်အစွန်မှာ ရေချိုးခန်းကြီးရှိတယ်ပေါ့။ အခန်းကျယ်ကြီးထဲမှာမှ ရေချိုးခန်းလေးတွေ၊
အိမ်သာလေးတွေအခန်းငယ်လေးတွေပြန်လုပ်ထားတာ။ တနေ့တနေ့ အလုပ်ပြီးရင် ပျော်နေကြတာပဲ။ စကားတွေဝိုင်းဖွဲ့ပြော၊ အတင်းတွေတုပ်၊ ပေါက်ကရတွေဆော့၊ တခါတလေ စားကြသောက်ကြပေါ့။ တနေ့ကြတော့ ပြောရင်းဆိုရင်းနဲ့ ညစ်တီးညစ်ပတ်တွေဆီရောက်သွားကောတဲ့ (ဟီးသူတို့အဖို့တော့ညစ်တီးညစ်ပတ်ပေါ့၊ ကျွန်တော်တို့အဖို့တော့ ဟဲဟဲ) အဲဒါနဲ့ နင်ဟာကြီးငါ့ဟာကြီးနဲ့ ဖြစ်ကုန်ပါလေရော။ ရေချိုးရင်းပြရဲလား ဘာညာဆိုပြီး စကြနောက်ကြနဲ့ တကယ်အဲဒီ့နေ့ကရေချိုးတော့ ကျန်တဲ့တအားမခင်တဲ့ မိန်းခလေးတွေချိုးပြီးလောက်လို့ အခန်းရှင်းလောက်မှသူတို့တွေတူတူသွားကြတယ်။
ကျွန်တော့်ချစ်ကြီးကလည်း ပြောတယ်အဲဒီထိ တကယ်ချွတ်ချိုးကြမယ်လို့ မထင်သေးဘူး။ စနောက်ပြီး လုပ်နေတဲ့အဆင့်ပဲရှိသေးတာ။ ပြရဲလား၊ ချွတ်ရဲလားနဲ့ဟီလာတိုက်နေကြတာပေါ့။ ရေချိုးခန်းကြီးထဲ ရောက်တော့ တခါးမကြီးကိုပိတ်။ ပြီးတော့ထမီရင်လျားတွေရဲ့ နင်အရင်ချွတ် သူအရင်ချွတ်နဲ့ ပဲတော်တော်ကြာနေသေးတယ်တဲ့။ ချစ်ကြီးကလည်းစမချွတ်ရဲဘူးလေ။ သူကတော့ ဘယ်သူမှစမချွတ်လဲ ထုံးစံအတိုင်းကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ရေချိုးခန်းလေး တခုထဲဝင်ချိုးတော့မယ်ပေါ့နော်။
ဒါမှမဟုတ်ရင်လျားနဲ့ပဲသူငယ်ချင်းတတွေ ရေဆော့ကြတော့မယ်။ မချွတ်ရလဲကောင်းတာပဲပေါ့ ဝတ်လစ်စလစ်ဆိုရှက်စရာကြီးပေါ့။ ကံကောင်းချင်တော့ နဲနဲရဲတဲ့တယောက်က ငါစချွတ်ရင်နင်တို့ပါမှာလားတဲ့။ အားလုံးကအင်းဆိုတော့ အဲဒီ့တယောက်က ထမီကိုလွှားခနဲချွတ်လိုက်ပါလေရော။ ခွိခွိ ခွိခွိပေါ့ အဲဒီတယောက်ကို အရင်ဝိုင်းရယ်ကြသေးတယ် နောက်မှအစီစီအရီရီ ထမီလေးတွေကို တန်းမှာတင်လို့ ဖင်တုံးလုံးကြီးတွေဖြစ်ကုန်ကြရော။ တယောက်နဲ့ တယောက်ကြည့်ကြ၊ ရယ်ကြပေါ့။
ရေချိုးခန်းလေးတွေရဲ့ တခါးတွေကိုမပိတ်ပဲ ဟိုဘက်ကနေဒီဘက်ကူး ဒီဘက်ခန်းကနေဟိုဘက်ခန်းသွားနဲ့ ချိုးကြတာ။ ပြီးတော့ နို့တွေ၊ ဖင်တွေ ယှဉ်ကြည့်ကြတယ်ပေါ့။ ကျွန်တော့်ချစ်ကြီးရဲ့ နို့ကမသေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့်အကြီးကြီးမဟုတ်တော့ သူတို့ထဲမှာသာမာန်ပေါ့။ ဖင်တုန်ကြီးကတော့ သူ့ထက်နည်းနည်းကြီးတာတယောက်ပဲရှိတယ်တယ့်။ သူတို့ထဲက ၂ယောက်ကလည်းဆီးခုံကို ဂတုံးတုံးထားတယ်။ ပြူးနေတာပေါ့။ သူ့သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ စောက်ဖုတ်အစုံစုံကို အဲဒီမှာပဲမြင်ဖူးသွားတာ။
စစချင်းတုန်းကတော့ ရှက်နေသေးတယ်။ နောက်ပိုင်းကြတော့ ပျော်သွားကော။ နို့တရမ်းရမ်း ဖင်ကြီးတွေတခါခါနဲ့နေမှာ။ ဖြန်းခနဲ ဖြန်းခနဲ သူ့ဖင်ကြီးကိုယ်ရိုက်လိုက် ကိုယ့်ဖင်ကြီးသူဆော်လိုက်နဲ့လဲ လုပ်လိုက်ကြသေးတယ်။ သူတို့အိုးကြီးတဲ့၂ယောက်ကတော့ အများဆုံးထိတာပေါ့။ သူထက်အသက်၁နှစ်ကြီးတဲ့ တယောက်ကတော့ လိုက်ဖက်တယ်။ ခရီးကပြန်လာရင်ဖက်သလောက်ပါပဲ၊ လာဖက်တော့လည်းပြန်ဖက်လိုက်တာပဲတဲ့။ ဒါပေမယ့်မိန်းမချင်း အသားစိုင်ချင်း၊ နို့ချင်းထိပြီးဖက်ရတော့ ရင်တော့တုန်တဲ့တယ်။
ပြောင်ချောချောကြီးနဲ့။ တော်တော်ကြာကြာ သောင်းကျန်းနေကျတာဘယ်တော့မှပြီးလဲဆိုတော့ တခြားမိန်းခလေးတချို့ ရှုးပေါက်ဖို့တံခါးလာခေါက်မှပဲ ရပ်တော့တာ။ ကျွန်တော်ဆို သူ့ကိုအဲဒီ့အကြောင်းခဏခဏပြန်ပြောခိုင်းတယ်။ အဲဒီထဲမှာပါတဲ့ သူ့သူငယ်ချင်းဒေါက်တာမတဝက်လောက်နဲ့က ကျွန်တော်နဲ့လည်းသူငယ်ချင်းအရင်းကြီးတွေဖြစ်နေပြီ ကျန်တဲ့လူတွေကိုကလည်း အကုန်မြင်ဖူးတယ်ဆိုတော့ ပြန်တွေးလို့တော်တော်ကောင်းတာ။ အများစုက ဆိုဒ်ကြီးဂိုက်ကြီးနဲ့ တလုံးတခဲကြီးတွေ ဟီးဟီး။
ဘယ်သူ့စောက်ဖုတ်ကဘယ်လိုပုံကြီး၊ ဘယ်သူကဂတုံး၊ ဘယ်သူကအမွှေးထူ။ ပြီးတော့ ရေလေးတွေသီးလို့။ ရေစိုစို ဖင်လုံးဖြူဖြူကြီးတွေကော၊ ဖင်တုံညိုညိုကြီးတွေကော တလှုပ်လှုပ်တရမ်းရမ်းနဲ့ ခုရေးရင်းနဲ့ တောင် နော် ဟင်းဟင်း…. တခြား အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်နေတဲ့သူတွေ ထက်စာရင် ဆရာဝန်မတွေက ပိုရဲမယ် ထင်တယ်။ ကျနော် ကြားဖူးတာက လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၅ နှစ်လောက်က ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် (ဖောင်ကြီးသင်တန်း) မှာ တစ်ရက်တော့ ဝန်ကြီး တစ်ယောက် ဝင်စစ်တယ်။
ပထမဆုံးအဆောင်မှာက ဆရာဝန်မ တွေနေတာ ထိပ်ဆုံး အဆောင်ပေါ့။ အဲ့ဒီ့ကို ဝင်စစ်ပြီးတော့ ဝန်ကြီးနဲ့နောက်တော်ပါးအဖွဲ့တွေအကုန်လုံး မျက်စိ မျက်နှာတွေ ပျက်ပြီး ပြန်ထွက်လာကြတယ်တဲ့။ အထဲမှာ ဆရာဝန်မတွေက ဘရာစီယာနဲ့နေတဲ့သူကနေ၊ အတွင်းခံစကဒ်နဲ့ နေတဲ့သူက နေဆိုတော့ ပြန်ထွက်ပြေးလာရတာ။ ဖောင်ကြီးသင်တန်း တက်ရတဲ့ ဝန်ထမ်းဆရာဝန်မ တွေဆိုတာကလည်း အသက် ၄၀ ကျော် ၅၀ သားသည် အမေတွေလေ။ အမျိုးသမီးတွေ ချည်းပဲ ရှိနေတဲ့အချိန်ဆိုတော့ လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေကြတာပေါ့။
အဲ့ဒီ့ဝန်ကြီးလည်း တစ်ခြားအဆောင်တွေ ဝင်မစစ်တော့ဘဲ အစည်းအဝေးခန်းမ မှာပဲ ခဏတစ်ဖြုတ်နေပြီး ပြန်သွားတယ်တဲ့။ နောက်ရက် ဖောင်ကြီးက ကျောင်းအုပ်က အမျိုးသမီးတွေ အနေအထိုင် ဆင်ခြင်ပါဆိုပြီး တန်းစီခိုင်းပြီး သတိပေးတယ်တဲ့။ ဖောင်ကြီးက ကျောင်းအုပ်ဆိုတာကလဲ ၁၀ တန်းအောင် အဆင့်နဲ့၊ အပွင့်ကြီးတွေ ပခုံးပေါ်တင်ထားတာ မဟုတ်လား။ သူတို့အတင်းတက်ခိုင်းလို့တက်ရတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေက ဆရာဝန်တွေ၊ တက္ကသိုလ် ဆရာ/ဆရာမတွေလေ။
ဒီလိုလူမျိုး ကျောင်းအုပ်လုပ်ပြီး သူတို့ကို လာနှိပ်ကွပ်တယ်ဆိုတော့ ပညာတတ် အသိုင်းအဝိုင်းပဲ ဘယ်နေမလဲ။ သူ သတိပေးတဲ့နေ့ပဲ ဆရာဝန်မတွေနဲ့၊ ဆရာမတွေ ရေချိုးခန်းမှာ အတွင်းခံတွေ၊ တချို့တွေက အပေါ်ပိုင်း ဟာလာဟင်းလင်းနဲ့ သောက်မြင်ကပ်လို့ ရွဲ့ပြီး သီချင်းတွေအော်ဆိုရင်း ကကြတယ်တဲ့။ xxxxx မမလဲ တူတူချွတ်ဖူးတဲ့အကြောင်းလေး ရေးဦးမယ် … မမ ကျောင်းမှာတုံးကပေ့ါ အရမ်းခင်တဲ့ သူငယ်ချင်း၅ယောက်ရှိတယ်….. မမအပါအဝင် ၆ယောက် … ၆ယောက်အုပ်စုပေ့ါနော်…. အရမ်းခင်ကြတာ ….
အဆောင်အတူနေကြာတာဆိုတော့ စားအတူ သွားအတူ လာအတူ အိပ်အတူ ကျောင်းပြေးတူတူ ကဲလဲအတူတူ အဲ မြက်ရိတ်ရင်တောင် ၁ယောက်ကို၁ယောက်ပြောပြီး ရိတ်ကြတာ…. ၆ယောက်လုံးတညီတညွတ်ဘဲ … ၂ယောက်၁ခန်းဆိုပေမဲ့ အဆင်ပြေတဲ့အခန်းမှာ၆ယောက်လုံးစုအိပ်တာများတယ် …အဲလိုတူတူနေတာကြာလာတော့ ၁ယောက်နဲ့၁ယောက်အကြောင်းလဲ အကုန်သိ … ကျောင်းပြေး ပြီးတော့ ရှောင့်ပင်းသွား မုန့်စား ရုပ်ရှင်ကြည့် အဲဒါတွေ ရိုးလာတော့ အခန်းထဲ စုပြီး ဟိုအတင်းပြော ဒီအကြောင်းပြောနဲ့ ၁ယောက်က စပြောတာ ပြကြမယ်ပေ့ါ …
ပထမ အသီးခေါင်းလေးဘဲဆိုပီး …. ၁ယောက်နဲ့၁ယောက် ဘယ်လိုတွေ ကွဲလဲပေ့ါ ……အားလုံးသဘောတူတာနဲ့ ချွတ်ကြတာပေ့ါ … ဟိ … ဘယ်တယောက်ပုံကလှတယ် …ဘယ်သူ့ဟာကကြီးတယ်….. ဘယ်သူက အသေးဆုံးလဲ ပေ့ါ …. ခိခိ …..အင်းးးးးးးး ပြီးတော့ တူတူချွတ်ပီးရေချိုးကြတာကတော့နောက်ဆုံးနှစ်မှ …… ကျောင်းကထွက်တဲ့ လေ့လာရေးကိုသွားကြတာပေ့ါနော် …. ရှမ်းပြည်ဘက်ကိုသွားတာ အပြန် ညဘက်ကြီး ပျဉ်းမနားမှာ ဝင်နားတော့ သူတို့ထားတဲ့နေရာက အကျယ်ကြီးပါ …
ကျောင်းသူတွေများနေတော့ ရေချိုးခန်းက မလောက်ချင်ဘူး ဗိုက်ကလဲ အရမ်းဆာနေပီ ဆိုတော့ ၆ယောက်သား ရေချိုးခန်း၁ခန်းယူပြီးတော့ ချိုးကြမယ်ပေ့ါ … ပထမ ရှက်နေကြတာနဲ့ နင်အရင်လုပ် နင်အရင်လုပ်နဲ့ ……. ခိ ………. နောက်ဆုံးတော့ ထမီနဲ့ဘဲချိုးချိုး အတွင်းခံဘောင်းဘီနဲ့ဘဲချိုးချိုး မနက်ဆို ခရီးကဆက်ဦးမှာ ဆိုတော့ အဝတ်စိုဆို သိမ်းရထုပ်ရ ရှုပ်တယ် ဆိုပီးတော့ပေ့ါ အားလုံးတုံးလုံးလေးတွေ ဖြစ်လို့ ….. ခိခိ …. ၁ယောက်ကို၁ယောက် ရေနဲ့ပက်ပီး ကစားနေကြတာ ပျော်စရာကောင်းမှကောင်း ….. အင်း ……. နောက်ကြောင်းပြန်ရင်းနဲ့ တူတူဆော့ ဖူးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို လွမ်းလိုက်တာ …….
ခုနေ ၁ခါလောက် အားလုံးတူတူစုပြီး အဲလိုပျော်ကြရရင် အရမ်းကောင်းမှာဘဲ လို့ ……… မမ xxxxxx တောက် အိမ်မှာနေတုန်းက ချောင်းဘူးတယ် ။မန်းတလေး မှာ မိန်းကလေးဆောင်ကလဲ အများသား။ တောက် မန်းတလေး အိမ်က ဆေးတက္ကသိုလ်နားမှာ ။ မိန်းကလေးအဆောင်က အိမ်ဘေးကပ်ရပ် မှာ ၁ ဆောင် မျက်နှာချင်းမှာ ၁ဆောင် ။ ဘေးကပ်ရပ်အဆောင် က အခန်း၁ခန်း ရဲ့ ပြတင်းပေါက်နဲ့ တောက်အကို အခန်း က ပြတင်းပေါက် က တည့်တည့်ကြီး အလွန်ဆုံးရှိ ၇ပေလောက်ပဲဝေးတယ်။
အစ်ကိုကအိမ်သိပ်မကပ်ဘူး ။ ညညဆို အစ်ကို့အခန်း ထဲဝင် မီးမဖွင့်ပဲ ပြတင်းပေါက် ကနေ အပီချောင်းတာပေါ့ ။ အပူရှိန်ပြင်းတဲ့နွေည တစ်ည မှာ တောက်အစ်ကိုအခန်းရဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်အခန်းက မီးလင်း နေတာနဲု ဝင်ချောင်းတာပေါ့။ အခန်းထဲ မှာ မိန်းကလေး ၁ ယောက် အိပ်ပြီး စာဖတ်နေတာ ပူလို့ နဲ့တူတယ် အပေါ်ပိုင်းကကြိုးတလုံးအင်္ကျီအဖြူရောင်ပါးပါးလေးနဲ့ ခေါင်းလေးတွေတောင် မြင်ရတယ်ဗျ ။အသားအရေ က ဝင်းဝင်းဝါဝါလေး အောက်ပိုင်းကတော့ အတွင်းခံပန်းရောင်လေးနဲ့ပဲ ကြည့်ကောင်းကောင်းနဲ့ကြည့်နေတုန်း ကံကောင်းချင်တော့ မိန်းကလေးနောက် ၁ယောက် ရေချိုးပြီး လို့ အခန်းထဲပြန်ဝင်လာတယ် ။
ထမိန်ရင်လျှားလေးနဲ့ ။။ အခန်းထဲရောက်တော့ ထမိန် ကို ခြွတ်ချပလိုက် တာ တောက်တောင်မျက်လုံးပြုးသွားတာပဲ ။ ရှမ်းမလေး အသားကဖြူဖွေးနေတာပဲ ရင်သားလေးတွေက နီနီလေး လုံး ပြီး တင်းနေတာပဲ။ ။အောက်ကတော့ အမွှေးတွေနဲ့ဘာမှမြင်ရပူး။ ။ တင်ကတော့ တော်တော်တောင့်တယ်။ လမ်းလျှောက် ရင် ဘယ်ညာ နိမ့်လိုက်မြင့်လိုက်နဲ့ ကောင်းမှကောင်းပဲ ။ အခန်းထဲမှာ ဖင်ပြောင် ကြီးနဲ့ ဟိုလျှောက်ဒီလျှောက် လုပ်ရင်း ယပ်တောင်ခက်နေ တာ ။ စောစောက စာဖတ်နေတဲ့ ၁ ယောက်က ထပြီး တင်ကို လှမ်းကိုင် လိုက်တာ ကို သူ ကလဲ ယပ်တောင်နဲ့ ပြန်ရိုက်ပြီး ကစားနေကျတာ ။
တောက်တောင်ဝင် ပြီး ကစားလိုက်ချင်တယ်။ အ ဟင်းဟင်း ။ ခဏ နေ တော့ ၂ ယောက် သား အင်္ကျီဝတ်ပြီး ထွက်သွား ကျရော ။ တောက်လဲ ရေချိုးခန်းပြေးပြီး ၁ ကြောင်းလောက် စွဲလိုက်ရတယ် ။ ။ နောက် ထပ်လဲ ခဏခဏ တွေ့ သေးတယ် ။ ထပ်တော့ရေးတော့ ပူးနော့် ။ မျက်နှာ ချင်းဆိုင် ဆောင်က ကောင်မလေးတွေရေ ချိုးတာလဲချောင်းဘူးတယ် ။ ၁ဆောင် လုံးနီးပါးပဲ ။ အဲဒါကိုတော့နောက်မှထက်ရေးတော့မယ် ။ hi5 နော် ။ အစဉ်ပြေရင် မြှားလေးတွေထောင်တာတွေ့ခြင်ပါတယ်
ကျနော်တို့ခေါင်းရင်းက စပြောပ့ါမယ်…ဗျာ…ဒီလို ဒီလို ကျနော်တို့ အိမ်အပေါ်ထပ်နောက်ခြမ်းက အခန်းလေးက ထရံကာထားတာပါ…ကြာလာတော့ ဆွေးလာပြီ…ရိုက်ထားတာက ကွာနေပါရောလား ကံကောင်းချင်တော့ ၁ ရက်မှာ ကြောင်က ဘယ်ကနေ အော်နေမှန်းမသိဘူး…တညောင်ညောင်နဲ့။ ကျနော်လည်း လိုက်ရှာတော့ သကောင့်သားက အဲ့ဒီထံရံမှာ တွယ်ကပ်နေတာ။ ဒါနဲ့ သနားပါတယ်လေ ဆိုပြီး တက်ဖြုတ်ပေးလိုက်တာပေ့ါ။ ဒါနဲ့ ဖြုတ်နေရင်း မျက်နှာချင်းဆိုင်က အကြီးမကြီးရဲ့ အသံကိုကြားမိတယ်ဗျ။
သူတို့ကလည်း ဝါးထရံကာထားတာပဲ။ ကျန်တာက သစ်တွေနဲ့ ။ ကျနော်တို့နဲ့ ကပ်လျက်ကိုပဲ ဝါးထရံနဲ့ကာထားတာ။ ဒီလိုနဲ့ ကြောင်ကို အောက်ချ။ အသာလေး ထရံကိုကပ်ပြီး ချောင်းလိုက်တော့…. အိပ်နေတဲ့ ညီလေးတောင် ရေအေးပက်လိုက်သလိုပဲ တန်းပြီး မက်တပ်လျက်တော့တယ်…အဲဒီတုန်းက ကျနော်က ၈ တန်း ၊ ကျနော်ချောင်းတဲ့သူက ၁၀ တန်း။ ပြီးတော့ ညီအစ်မတွေ ထဲမှာသူက အသားအဖြူဆုံးနဲ့ အတောင့်ဆုံးကြီး။ မြင်လိုက်ရတာက အပေါ်ပိုင်းက ဗလာ….နိ့သီးခေါင်းလေးက နီတွက်ပြီး ရဲနေတာပဲ။
လုံးပြီးတင်းနေတာ..ဆိုက်ဒ်ကတော့ ၃၆ လောက်တော့ ရှိမယ်ထင်တယ်။ အောက်ပိုင်းကိ ထမိန်နဲ့…သနပ်ခါးလူးနေတာ…ကျနော်လည်း တကြောင်းပြေးလိုက်တာပေ့ါ…ဟီးးးးးး ပြေးနေလို့ မောနေတုန်းပဲရှိသေးတယ်…သူက အပေါ်ပိုင်းဝတ်ပြီး အောက်ပိုင်းကို ချွတ်ချလိုက်ပြန်ရော….အကွာအဝေးက ၂ ပေ၊ ၃ ပေပဲ ကွာတာဗျာ… ကိုဆောင်းဦးသီချင်းလို့..အသက်ရှုမှားလောက်အောင် မင်းကိုမြင်ဖူးတယ် လုပ်ရမလိုဖြစ်နေတာ။ နောက်တကြောင်းထပ်ဆွဲမိပြီးသားဖြစ်သွားတယ်.။
မို့မို့ဖောင်းဖောင်းမည်းမည်းလေးကို ဘေးတိုက်မြင်လိုက်ရတာပေ့ါ။ စာနဲ့ကွတ်ကွတ်ကွင်းကွင်းရေးမပြတက်တော့ ခက်သားပဲ..ဟီးးးးးးး အိမ်ချင်းက ကပ်လျက်ဆိုတော့ လာထား…ဘယ်သူပဲ ချိုးချိုး…ကျနော်က တစ်–နေရာယူ ၊ နှစ် – အဆင်သင့်ပြင်ပဲ ဟီး ဒါက အကြီးမကြီး ဇာတ်လမ်းပါ… အားလုံးပဲ အဆင်ပြေလား….အဆင်ပြေရင် ၅ ထောင်လောက်ချေးပါ….ဟီးးးးးးးးးးးးးး xxxxx ကျွန်တော် ၉တန်းတုန်းက တနေ့ကျောင်းကပြန်လာတော့ အိမ်ဘေးကဒေါ်ကြီးရေချိုးတာနဲ့တိုးတယ်ဗျ
ကျွန်နော်ကလဲ ဘာရယ်မဟုတ် အကွယ်လေးတနေရာကနေကြည့်မိတာပေါ့ဗျာ ဆောင့်ကြောက်ထိုင်ချိုးနေတာပေါ့ဗျာ အဲဒီအချိန်မှာ ထဘီရဲ့အရှေ့အစကိုမပီးလည်ပင်းကိုဂျီးတိုက်ရော (ဘယ်လိုပြောရမလဲ ထဘီရင်လျားထားတဲ့ အပေါ်ဘက် အစမဟုတ်ဘူး ခြေထောက်ဘက်ကအစ မြင်ကြလားမတိဘူး ဟီး ) အဲဒီအချိန်မှာ အောက်စလွတ်ပီး တူ့ညီမလေးဘွားကနဲပေါ်လာရော ပထမဆုံးတွေ့ဘူးတာဆိုတော့ လူကလဲက ကတုံကယင်နဲ့မှတ်မိပါသေးတယ်
ငယ်ငယ် တုန်း က အိမ်နဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင် မှာ ညီမ ၃ ယောက်ရှိတယ်ဗျ အငယ်ဆုံးက ကျွန်တော့်ထက် ၁ နှစ်ကြီးတယ်… ကျနော် ချောင်းဖူးတာက အလတ် မ ဆွိ လို့ ခေါ်တယ်ဗျ အဲဒီအိမ်က ငယ်ငယ်လေးကထဲကဝင်ထွက်နေကျဆိုတော့ အေးဆေးပဲ.. ချောင်းတဲ့နေ့ က ရည်ရွယ်ထားတာတော့မဟုတ်ဘူး အဲဒီအိမ်ရောက်နေရင်းနဲ့ ပေါ်ထပ်မှာ TV ကြည့်နေတာ ရေချိုးခန်းထဲ ဝင်သွားတုန်းကတွေ့လိုက်တယ် အမှတ်တမဲ့ပဲ ထွက်လာတော့ သူက “ဘာကြည့်နေတာလဲ..” ဆိုပြီး ဘေးခန်းထဲဝင်သွားတာ နဲ့ လိုက်ကြည့်မိတာ မမလေးက အခန်းထဲရောက်တာနဲ့ ပေါ်တင်ပဲ ကွင်းလုံးချွတ်ချ လိုက် တာ မျက်လုံးထဲက ခုထိ ထွက်ဘူးဗျာ
အဲတုန်းက ၇ တန်း ပဲရှိသေးတော့ ဂွင်းတောင်စတိုက်တတ်ခါစ.. မျက်လုံးပြူးပြီး ငုတ်တုတ်ခဏမေ့သွားတယ်… တအောင့်လောက်ရှိမှ ရှက်ပြီး အဲဒီအိမ်က နေတခြိုးထဲလစ်ပြီး အိမ်မှာ သွား တိုက်တော့တာပဲ… အဲဒါက ပထမဆုံးချောင်းလိုက်ရတာပဲ ဘာမှန်းတောင်ကောင်းကောင်းမသိလိုက်ဘူး… ကျနော့် ဆရာမ ဖြစ်တဲ့ သူ့အမ ကြောင်းကတော့ နောက်မှ ဖောက်သယ်ချတော့မယ်…. xxxxxxx သူများတွေရေးတော့ ကျွန်တော်လဲ မှတ်မိတာတစ်ခုရေးဦးမယ်။ ကျွန်တော်လဲ ငယ်ငယ်တုန်းကပေါ့။
အိမ်ကိုအမျိုးတွေလာလည်တယ်ပေါ့ အဘွားရယ် အစ်မတဝမ်းကွဲရယ်လာလည်တယ်။ တစ်နေ့ဖြစ်ချင်တော့ အိမ်ကလူတွေအပြင်သွားကြတယ်။ အိမ်မှာ ကျွန်တော်ရယ် အဘွားရယ် အစ်မတဝမ်းကွယ်ရယ်ပေါ့။ အဲ့အချိန်မှာ အဘွားကအရှေ့မှာပေါ့ (သူက ခြေထောက်သိပ်မကောင်းဘူး) အစ်မကတော့ အိပ်ယာကထလာပြီးရေချိုးဖို့ပြင်တယ်။ ရေချိုးခန်းထဲရောက်သွားတယ်ပေါ့။ အဲ့မှာ စိတ်ကထလာတယ် ချောင်းကြည့်ချင်စိတ်ပေါ့။ အိမ်ရဲ့ရေချိုးခန်း တံခါးက အလယ်လောက်မှာချောင်းကြည့်လို့ရတဲ့အပေါက်ရှိတယ်ဗျ။
သူရေချိုးနေသံလဲကြားရော အပေါက်ဝကနေ ပယ်ပယ်နယ်နယ်ချောင်းတာ။ အရှေ့မှာလဲ အဘွားကရှိတယ်ဆိုတော့ ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ချောင်းရတာပေါ့။ ရေချိုးခန်းအပေါက်မှာလဲအောက်မှာကရေတွေ။ ဒူးထောက်ပြီးချောင်းတာပေါ့။ ချောင်းတော့ဘာမြင်လဲဆိုတော့ သူက ပေါင်ကြားကို ဆပ်ပြာတိုက်နေတာဗျ။ ဘာမှလဲမြင်ရဘူး အမွေးမဲမဲလေးတွေပဲတွေ့ရတယ်။ အဘွားလာမှာလဲကြောက်တာနဲ့ ခဏပဲချောင်းပြီး ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုနေလိုက်တယ်။ သူထွက်လာတော့လဲမသိချင်ယောင်ဆောင်လို့ပေါ့။
အဲ့တုန်းက ညီမလေးကို မမြင်ဖူးသေးဘူးဗျ ငယ်သေးတယ်ပေါ့။ တော်တော်ရင်ခုံခဲ့ရပါတယ်။ ဒါနဲ့ပြောရဦးမယ် ကျွန်တော်ပဲနုံတာလားတော့မသိ ကျွန်တော်က ၁၀တန်းလောက်မှ ညီလေးနဲ့၅ယောက်ခံချဘူးတယ်။ ထိုကြောင့် အဲ့တုန်းကချောင်းပြီး သူများတွေလို မတိုက်ခဲ့လိုက်ရကြောင်း.. xxxxx ကျနော် ငယ်ငယ်က ချောင်းတာကံမကောင်းဘူး .. အိမ်မှာလာအလုပ်လုပ်တဲ့ အစ်မကြီးတစ်ယောက်ကို ချောင်းတာ .. သူက အဲ့တုန်းက ၂ဝဝန်းကျင်လောက်ပဲ ရှိဦးမယ်ထင်တယ် ..
ကျနော်ကတော့ ၁၅ နှစ်လောက်ပေါ့ .. အိမ်နောက်ဖေး ထမင်းစားစားပွဲက ရေချိုးခန်းရှေ့တည့်တည့်မှာ ရှိတာ .. စစချင်း မချောင်းရဲတော့ .. လူကြီးတွေအလစ်ကြည့်လိုက် .. ချောင်းမလို့လုပ်ရင်း လန့်ပြီး စားပွဲမှာ ပြန်ထိုင်လိုက်နဲ့ .. ဂနာမငြိမ်ဖြစ်နေတာပေါ့ .. နောက်ဆုံးကျတော့ ဘာဖြစ်ဖြစ်ကွာဆိုပြီး .. ရေချိုးခန်းတံခါးအောက်က အပေါက်ကလေးကနေ ချောင်းလိုက်တာ .. အဲ့အစ်မက ရေချိုးပြီးလို့ ထမိန်တောင်ဝတ်ပြီးနေပြီ .. နောက်တစ်ယောက်က အသက်၃၆နှစ်လောက်ရှိပြီပေါ့ အဲ့တုန်းက ..
သူ့အလှည့်ကျတော့ ရေချိုးတာနဲ့ အမြန်ချောင်းကြည့်တာ .. တွေ့ပါတယ်ဗျား .. ဖင်တုံးလုံးနဲ့ .. အပေါက်က တံခါးအောက်ဖက်မှာရှိတာ သူတို့ရပ်ချိုးရင် ချောင်းလို့ကောင်းမှာ .. ကံဆိုးချင်တော့ သူက အဝတ်လျှော်ဖို့ ထိုင်လိုက်တာ .. ချောင်းနေတဲ့ ကျနော့်ကို တန်းတွေ့ပါရောလား .. ဖီးလ်တက်နေတာတွေ ပျောက်ချင်းမလှပျောက်ပြီး လူက ထူပူသွားတာပဲ .. ဘာလုပ်လို့ဘာကိုင်ရမှန်းတောင် မသိတော့ဘူး … သူလဲ အရမ်းစိတ်ဆိုးပြီး ကျနော့်အဒေါ်ကို ပြန်တိုင်ရော .. လူကြီးတွေ ဆူလိုက်တာ ရစရာမရှိဘူး ..
ရှက်လိုက်တာ ခုချိန်ထိ အမေဆို အဲ့အကြောင်းပြောပြီး စကားနာထိုးတုန်း .. လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၄နှစ်လောက်က ဖြစ်ခဲ့တာလေးပါ .. မနှစ်က ရန်ကုန်ပြန်တော့ သူနဲ့ ပြန်တွေ့တယ် .. သူ့တူမပါ ကျနော်တို့အိမ်ရောက်နေတယ် .. အခုပြန်တွေ့တော့လဲ အေးဆေးပါပဲ .. ကျနော်တောင် သူ့ကိုဇက်ကြောဆွဲပေးလိုက်သေးတယ် .. ချောင်းထားတဲ့အပြစ်လေး ကြေအောင်ပေါ့ xxxxx ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်အဒေါ်ရေချိုးနေတာကိုချောင်းကြည့်ဘူးပါသည်။ ကျွန်နော်တို့အိမ်တွင်ရေချိုးခန်း၂ခန်းရှိပါသည်။
ရေချိုးခန်း၂ခန်းလုံးဘေးကပ်ရပ်ဖြစ်ပါသည်။ တနေ့အဒေါ်ရေချိုးနေတူန်း၁ဖက်ရေချိုးခန်းမှအပေါ်က်ဖောက်ထားပြီးအစအဆုံးအထိချောင်းခဲ့ဘူးပါသည်။ သူရေချိုးချိန်မှာမိနစ်၃၀ခန့်ကြာသည်ထို့ကြောင့်ကျွန်နော်လည်း၂ကြောင်းလောက်တော့်တိုက်လိုက်သည် ။ နောက်၁ခေါက်က မမဆွိ ရဲ့မမ သူ့ကိုမှ တကယ်ချောင်းတာဗျ…. သူတို့အိမ် ခေါင်မိုးထပ်မှာ စွန်တက်လွှတ်ပြီး ဆင်းလာတာသူတို့မောင်၁ဝမ်းကွဲလဲပါတယ်ဗျ လှေကားကဆင်းဆင်းချင်း အသံတွေကြားတာနဲ့ နှစ်ကောင်သား လက်တို့ပြီး အသာလိုက်ချောင်းတော့ မမ က သူ့ဘဲနဲ့ အပီဆွဲနေတာ…
ကျနော်တို့နှစ်ယောက်လဲ လှေကားမှာတင် ဂွင်းတွေထုတ်တိုက်ကြရော… ချောင်းတာ ၁ နာရီလောက်ကြာတယ်ဗျ… သူတို့ပြီးလို့ထွက်လာတော့ မသိချင်ယောင်ဆောင်နေပေမဲ့ မကြည့်ပဲမနေနိုင်လို့ ကျနော်တို့ ချောင်းမှန်းရိတ်မိပုံရတယ်.. ကျနော်တို့နှစ်ယောက်လုံးက ပြုံးစိစိ လုပ်နေ တာ… နောက်နေ့ အဲဒီမမ ကိုတွေတိုင်း ကိုယ်တုံးလုံးပဲမြင်နေလို့ ခက်ခက်နေရောဗျာ… သူတို့နှစ်ယောက် က လက်ဦးဆရာလို့ပြောလို့ရတယ် အဲနောက်ပိုင်းမှ video တွေ စာအုပ်တွေ ပိုငှားကြည့်တတ်တာဗျ…..
ကိုယ်တွေ့ပထမဆုံးကိုတော့ နောက်မှဗျာ… xxxxx ကျနော်ကတော့ ညီအစ်မ သုံးယောက်ကို စုံနေအောင် ချောင်းတာပါပဲ။ ဘယ်သူရေချိုးချိုး ကျနော်ကတော့ အသင့်အနေအထားပဲ။ သူတို့ဘာလုပ်လုပ် ၊ ဘာ ဝတ်ဝတ်အကုန်မြင်နေရတယ်။ အခုကတော့ အလတ်မအကြောင်းပြောပြမယ်။ ပြဿာနာက ဒီလိုဗျာ တရက်..ချောင်းနေကြ အတိုင်းချောင်းတာပေ့ါ။ ဒီတခါတော့ အလတ်မကိုတွေ့တယ်..သူငယ်ချင်းလည်း ဖြစ်ပြန် ၊ သူကလည်း ခေသူမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ ပျော်တာပေ့ါ။
သူက အိမ်နောက်ဖေးပြတင်းတံခါးအရင်ပိတ်လိုက်တယ်ဗျ။ ပြီးတော့ သူများတွေလို ထမိန်ဝတ်ပြီးမှ အကျီချွတ်တာမဟုတ်ဘူး။ အကုန်လုံးကို တခုချင်းစီချွတ်ချတာ။ အခုထိမြင်ယောင်တုန်း။ နိ့ကလည်း တုတ်ခိုင်၊ အောက်က ဆီးစပ်က အမွှေးလေးတွေက ရေး တေးတေးလေးတွေ။ ကျနော်လည်း ဘက်တူ လုံးတူဆိုတော့ မခံမရပ်နိင်ဖြစ်ပြီ။…ဇွတ်လုပ်လိုက်တာ…အရှေ့က ကပ်ကြည့်နေတဲ့ ထရံကို သွားဖိမိရော။ ဖိမိတော့ ဟိုထရံကလည်း အသစ်မှ မဟုတ်တာ…
အသံတွေထွက်ကုန်တော့ သူက ချွတ်နေရင်းနဲ့ အလန့်တကြားမေ့ာကြည့်တယ်။ မော့ကြည့်တော့ ထရံအပြင်ဘက်မှာ လှုပ်ရှားသွားတဲ့ အလင်းအမှောင်ကို သတိထားမိမှာပေ့ါ။ ကျနော်လည်း အသာလေးနှောက်ဆုတ်ပြီး…ငြိမ်နေလိုက်တယ်။ အမယ်….သူက လည်တဲ့ဗျာ။ သူတို့ အိမ်ဘေးက ပြတင်းပေါက်ကနေ…အဲဒီထရံကို သွားကြည့်နေတာ။ ကျနော်လည်း ငြိမ်ပြီဆိုပြီးတော့…ခေါင်းလေး အထွက်… အမလေးလေး အော်လိုက်တာဗျာ…နှာဘူးတွေရော..၈န်တူးတွေရော…စုံလို့။
တော်သေးတယ် ခေါင်းထွက်တုန်းဆိုတော့ ဆံပင်ပဲမြင်လိုက်ရလို့။ နောက်ဆို သူ့ရေချိုးရင် လွှတ်ပေးထားတယ်..ကျန်တဲ့ အငယ်မနဲ့ အကြီးမကတော့ သိပါဘူး။ ဒီလိုနဲ့ ကျနော်ကလည်း ချောင်းတုန်း ပေးတုန်း…သူတို့ကလည်း ချွတ်တုန်း ချိုးတုန်း။ ကျနော် သူတို့အိမ်ဘေးကနေ ပြောင်းတဲ့အထိပဲ…ဟိ။ xxxxx အဲ့ချိန်တုန်းကဆိုတော့ ကိုယ့်အသက်က ၂၀ မပြည့်… ၁၈ နှစ်လိုလို ၁၇ နှစ်လိုလို အချိန်လေးပေါ့ဗျာ ကျနော့် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က မိန်းမယူလိုက်ပါတယ်…
သူ့ကောင်မလေးက ရွာတစ်ရွာကပါ ရွာမှ တကယ့်ရွာပါ…. အိမ်တစ်အိမ်နဲ့ အော်မကြားခေါ်မကြားပါ ဓါးပြဝင်တိုက်သွားရင်တောင် မသိနိုင်တဲ့ အကွာအဝေးပေါ့ တစ်ရက်ကျတော့ သူ့မိန်းမရွာကိုသွားလည်ကြမယ်ပေါ့ ကျနော်တို့ကို လိုက်မလားလို့ခေါ်တော့ ဟဲဟဲ လိုက်တယ်ပေါ့ နှစ်ခါမငြင်းပါဘူး ဘာလို့ဆို ကျောင်းတက်တုန်းက တစ်ခေါက်သွားလည်တော့ အဲ့အိမ်မှာ ၁၆၊၁၇ လောက်ရှိမဲ့ ကောင်မလေး ချောချောလေးတွေ့ထားတာကိုး အဲ့လိုနဲ့ ရွာရောက်တော့ ကျတော်တို့အုပ်စုက အိမ်ပေါ်ထပ်မှာနေပါတယ် အိမ်ပေါ်ထပ်ဆိုပေမယ်.
တစ်ဝက်ပဲဆောက်ထားတာဗျ…သူ့အိမ်ပေါ်ထပ်က… အိမ်အလျားရဲ့ တစ်ဝက်ကိုပဲ အထပ်တင်ထားတာ… ဟဲဟဲ သိတဲ့အတိုင်း ညနေကျတော့ ရေချိုးကြတယ်.. အိမ်အောက်ဆင်းတော့ စောနက ကျနော်ပြောတဲ့ ကောင်မလေးက အခန်းတစ်ခန်းထဲ ဝင်သွားတယ် သူဝင်သွားတဲ့အခန်းက ကျနော်တို့အိမ်အပေါ်ထပ်ကနေချောင်းရင် မြင်ရတယ် တိုတိုပြောရရင်တော့ ကောင်မလေး ရေချိုးပီးချိန်ကို ကျနော်တို့ တစ်ဖွဲ့ ဝိုင်းချောင်းကြတာပေါ့… ကောင်မလေးက ခုမှ တက်စ ဖွံ့စဆိုတော့ ဘာပြောကောင်းမလဲ ရေချိုးပီး သနပ်ခါးလိမ်းတာ ဘော်လီ (သူတို့က တောဆိုတော့ ဘောလီပဲ ဝတ်တယ် ခိခိ)
ဝတ်တာ.. ပန်တီ ဝတ်တာတွေအကုန်ချောင်း ချောင်းချောင်းပီးထုပေါ့ ဟီး..အဲ့ထဲမှာ မိန်းမယူထားတဲ့ကောင်လဲ ပါတယ်… ကောင်မလေးက သူ့မိန်းမရဲ့ တစ်ဝမ်းကွဲ ညီမ သူလဲ ချောင်းတာပဲ ညကျတော့ ဆုံထောင်းပေါ့… တစ်ရက်ကျတော့ ထုံးစံအတိုင်းချောင်းတာ ….အဲ့အချိန် ဟိုကောင့်မိန်းမက အောက်ထပ်အခန်းထဲ ဝင်လာတယ် သူလဲ ရေချိုးပီးလို့ အဝတ်လဲတာပေါ့… အဲ့မှာ ဟိုကောင် အတင်း ကျနော်တို့ကို လိုက်ဆွဲတာ ဟေ့ကောင်တွေ ငါ့မိန်းမနော် ငါ့မိန်းမတဲ့ ဟားဟားဟား ကျနော်တို့မှာ ထုရင်း တန်းလန်းကြီးတွေ ဖီးလ်ငုတ်တာဗျာ..
ကျွန်တော့်ကျောင်းတုန်းက မိန်းမအိမ်သာတွဲနဲ့ ကျားအိမ်သာတဲက ဘေးချင်းကပ်ဗျာ… ကျောင်းဆိုတော့ဗျာ. အိမ်သာတွေက အပေါ်မိုးက ခေါင်မိုးပဲရှိတာ. ကျွန်တော်တို့တတွေ ဘယ်လောက်ဆိုးကြလဲဆိုရင် စီလင်းတစ်ချပ်ကိုခွဲ.. ခေါင်မိုးထဲဝင်.. မိန်းမအိမ်သာဖက် တွားသွား… ဟဲဟဲ.. မိန်းမအိမ်သာဖက်ကတော့ ခွဲစရာမလိုဘူးဗျ. မြန်မာပြည်လေ သိတယ်မလား. အပေါက်ပေါင်း သောင်းခြောက်ထောင်.. ဘယ်မိန်းကလေးထင်မလဲ. ကျွန်တော်တို့ အပေါ်မှာ ရှိနေတယ်ဆိုတာ… ခေါင်မိုးက အပိတ်ကြီးကိုး. အဲ ဆုံတော့ ထောင်းလို့ရဘူးဗျ.
လေးဘက်ထောက်နေနေရတာလေ….. အဲ့ဒီခေတ်က ဖုန်းတွေမရှိသေးဘူးဗျ. ရှိတဲ့ဖုန်းကလဲ… C28 တို့ MPT ကပေးတဲ့ ဖုန်းတွေလေ. ကင်မရာမပါဘူး.. ရိုက်လို့ရလို့ကတော့ကွာ တက္ကသိုလ် အိမ်သာထဲမှာ လူစည်မှာ မြင်ယောင်သေး ဟေးဟေး… တွေ့ရမြင်ရတာလေးတွေ ဆက်ရှဲအုံးမယ်. မိန်းမအိမ်သာဆိုပြီး ပထမက သန့်ပြန့်နေမှာလို့အထင်ကြီးမိတာ. ရောက်မှ စိတ်ကိုကုန်ရော. ညစ်ပတ်နေတာဗျာ. အနံ့တထောင်းထောင်းပဲ. ကျားအိမ်သာပဲ ညစ်ပတ်တယ်ထင်တာ. ကျောင်းအိမ်သာဆိုတော့ ရေကလည်း နည်းနည်းရှားတာလဲပါတာပေါ့လေ.
တစ်ရှူးတွေလည်း ပွစာကျဲ.. ပေါင်မုန့်ယိုသုတ်တွေလည်း ဟိုတစ်ထောင့် ဒီတစ်ထောင့် မြင်မကောင်းပါဘူးဗျာ. မြင်မြင်ချင်း ဖီးလ်လာဖို့နေနေသာသာဗျာ. နံလို့ ပြန်တောင်လှည့်ချင်သွားတယ်. သူငယ်ချင်းတွေက အတင်းပိတ်ထားလို့ စိတ်ပျက်ပျက်နဲ့ ဆက်ချောင်းလိုက်တယ်. ဟဲဟဲ တော်တော်ကြာသွားတယ်ဗျ. ကျွန်တော့်စိတ်ထင် ၃-၄ နာရီလောက်တောင် ကြာမယ်ထင်တယ်. သတိထားမိတာ တစ်ခုက မိန်းမတွေကျောင်းမှာ ရှူးရှူးပဲ ပေါက်တာ များတယ်. အီးအီး မပါကြဘူးဗျ. ဝမ်းတော်တော်ခိုင်ကြတယ်နဲ့တူတယ်.
အပေါ်စီးက ကြည့်ရတော့ ထမိန်ကာနေလို့ ရေးရေးပဲ မြင်ရတယ်. မွှေးထူတဲ့သူတွေမှာ မွှေးမြင်ရတယ်. ပန်တီတွေကတော့ ရောင်စုံပဲ. တစ်ခုက အိမ်သာထဲမှ ဘာမှန်းမသိဘူး. ပေါက်ပြီးတာနဲ့ အပြင်မထွက်ကြဘူး. အိမ်သာထဲမှာ အာလူးဖုတ်နေကြတယ်. သူတို့အနံ့ သူတို့ပဲ ခံနိုင်လွန်းတယ်. xxxxx ကျွန်တော် ၈တန်းကျောင်းပိတ်မှာ နယ်ကကြီးတော်တို့မိသားစု အိမ်မှာလာတည်းကြတယ်ဗျ။ သူ့သမီးကြီးလည်းပါလာတယ်။ ကြီးတော်ကမှ အမေနဲ့ တဝမ်းကွဲဆိုတော့ ကျွန်တော့်၂ ဝမ်းကွဲအမပေါ့။
နည်းနည်းတော့ဝေးတယ်။ အဲတုန်းကသူက ပထမနှစ်လား၊ဒုတိယနှစ်လားတောင်မသိဘူး။ အိမ်မှာ၅ရက်တောင်တည်းတယ်ဆိုတော့ ကျွန်တော်လည်းချောင်းတယ်ပေါ့ဗျာ။ ဒါပေမယ့် အမရေချိုးတိုင်း ကျွန်တော်အိမ်သာဝင်တယ်ဖြစ်မှာဆိုးလို့ ၂ခါပဲချောင်းလိုက်ရတယ်။ ကျွန်တော်အပေါ် Post မှာပေါ်ထားသလိုပဲ နံရံခြေကန်သိုင်းကွက်နဲ့ တက်ပြီး ထုပ်တန်းကြားကခေါင်းပြူချောင်းရတာ။ အမက ဆံပင်လေးစည်းပြီးတော့ ချိုးတာဗျ။ အမက အပြင်ကအသားသိပ်မဖြူပေမယ့် အတွင်းသားတွေတော့ဖွေးနေတာပဲဗျ။
တင်ပါးလေးတွေက လုံးလုံးကျစ်ကျစ်လေး။ ရေလေးတွေစိုတော့ ဖင်လုံးလေးတွေကို ပြောင်နေတာပဲ။ အခုမျက်စိနဲ့ဆို သိပ်မကြီးလောက်ဘူးဆိုပေမယ့် ကျွန်တော်ကအဲဒီ့တုန်းကငယ်သေးတော့ ကြီးတယ်ပဲမြင်တယ်ပေါ့နော်။ ပိပိလေးတောင် တောမထူသေးဘူး။ ခပ်ပါးပါးရယ်။ ရေတောင်သိပ်မသီးဘူး။ အသက်သိပ်မကြီးသေးလို့ထင်တာပဲ။ သူလည်းဆပ်ပြာတိုက် ကျွန်တော်လည်းတိုက်ပေါ့။ ဒီတခါတော့ နပ်သွားပြီဗျ။ အရင်အန်တီကြီးကိုကြည့်ပြီးလုပ်တုန်းကလို လက်လွတ်စပယ်မလုပ်တော့ဘူး။
ပုဆိုးလေးပဲအပေခံလိုက်တယ်။ ပြီးတော့မှ အသာလှည့်ဝတ်ပြီးပြန်ထွက်လာတာ။ xxxxx ကျနော့်အိမ်ရဲ့နောက်ဖေးမှာ တဲလေးတစ်လုံးရှိတယ်ဗျ။ ကျနော် ဆယ်တန်းတုန်းက အဲဒီတဲ ထဲမှာ တစ်ယောက်ထဲဝင်ပြီးစာကြည့်တာပေါ့။ တဲကဝါးထရံကာထားတာ ဆိုတော့ ဘေးအိမ်ကဆော်တွေရေချိုးတာ ကိုအပီချောင်းတာပေါ့။ ဘေးအိမ်ကဆော်တွေက နောက်ဖေးမှာစဉ်ွှအိုးချပြီးရေချိုးတာ။ ကျနော်ကတော့ချောင်းလိုက် ဂွင်းထုလိုက် စာကြည့်လိုက်ပေါ့။ အဆင်ကိုပြေလို့
လယ် ကွင်း ထဲ မှာ ကျင်း ပ တဲ့ အ ချစ် ပွဲ